जर्मन वकिल अनलाइन. सबै भन्दा ठूलो कानूनी.
एक वकील परामर्श
सुरुमा आकलन द्वारा एक विशेष वकील मान्छ कुनै कानूनी सल्लाह कम्पनी काम मात्रै वकिल संग र आत्म-कार्यरत कर सलाहकार छन्जो विशेष मा.
क्षेत्र को समाज (सीमित दायित्व). यो वकील परामर्श गर्नेछ द्वारा बाहिर गर्न सकिन्छ.
अग्रिम भुक्तानी अनुसार: छ जब, वकील एक
कुनै पनि वकील
निम्न संग क्याल्कुलेटरतपाईं गर्न सक्छन् गणना आधार मा प्रक्रियाहरु को तल सेट को मूल्य को अनुमानित वकील गरेको शुल्क: सही गर्न अग्रिम अनुसार. कुनै कुरा यो छ कि एक आपराधिक रक्षा वकील.
देखि नेट आय को दुवै
विशेषज्ञ वा सम्बन्धविच्छेद वकील सल्लाह दिइएको छ. यो सोध्न सक्छ वकील लागि सल्लाह छैन अघि बढाउन लागत अनुसार यही लागू हुन्छ भने कार्यवाही कानूनी सहायता प्रदान गरियो र वकील द्वारा नियुक्त गरियो अदालत । उहाँले सक्नुहुन्छ. तथापि.
बनाउन एक अग्रिम अनुरोध गर्न ग्राहक भने.
कानूनी सहायता अझै अनुमोदित छैन. र छैन पैसा फिर्ता अग्रिम पछि अनुमोदन गरेको छ । अनुसार खण्ड नौ वकील सोध्न सक्छ लागि एक"उचित"अग्रिम छ । यो संकेत देखिन्छ कि ग्राहकहरु सक्छ मात्र सुत्छन् गर्न आवश्यक एक भाग को कानूनी लागत पूर्व-कर. वास्तवमा. तथापि. एक वकील गणना गर्न सक्छन् सबै शुल्क खर्च र आवश्यक खर्च गर्न. अग्रिम अनुसार अग्रिम राशि लागत मा हुन सक्छ यसरी समान हुन कि सम्पूर्ण वकील गरेको शुल्क । को मामला मा एक छोडपत्र. यो निर्भर मूल्य को विषय. जो परिणाम. मूल्य विवाद को शक्ति को आपूर्ति क्षतिपूर्ति. र अदालत को परिणाम कुराहरू । यो भन्न सकिन्छ. त्यसैले. कुनै मानक राशि रूपमा. लागत खडा व्यक्तिगत परिस्थिति । राजीनामा हुनुपर्छ मा घोषणा. त्यसैले ग्राहक हुन्छ तिर्न मौका अग्रिम अनुसार तर अझै पूर्ण वा. यदि आवश्यक. गर्न नियुक्त कारण समय मा एक फरक वकील. त्यसैले उहाँले खडा मा अर्को अदालतले मिति बिना कानूनी प्रतिनिधित्व ।.
वकील-आपतकालीन-अनुप्रयोग Ö कानूनी संरक्षण बीमा
तपाईं जरुरी आवश्यकता होकानूनी सहायता वा खोजिरहेको एक वकील लागि एक विशिष्ट समस्या छ । उदाहरणका लागि. छन् किनभने तपाईं बस मा संलग्न गरिएको एक यातायात दुर्घटना वा प्रहरी रोकियो किनभने तपाईं को एक कुनै न कुनै यातायात अपमान छ । (जर्मन व्यवस्था वकील सेवा) संग एक व्यापक लाभ प्याकेज । वकील-आपतकालीन. हामी लैजानु गर्न तपाईं आकस्मिक को मामला मा भित्र जर्मनी घडी वरिपरि. एक आत्म-कार्यरत वकील लागि एक फोन परामर्श । आफ्नो ग्राहकहरु को लागि. Ö लिन्छ -एजी. शुल्क । यो पनि लागि प्रयोग नियुक्ति को एक योग्य अभ्यास वकील गर्ने सल्लाह दिन्छन् तपाईं आफ्नो क्रम मा भन्दा फोन मा अनुरोध छ । र. रूप अक्सर तपाईं आवश्यक यस मदत । पहिलो परामर्श समावेश छ लागि ग्राहकहरु को Ö देखि एक बीमित कानूनी संरक्षण ब्लक लागि निजी ग्राहकहरु बीमा योगदान छ । मा वकील डेटाबेस तपाईं को लागि खोज गर्न सक्छन् वकिल राष्ट्रव्यापी वकिल. अनुसन्धान. र प्रत्यक्ष सम्पर्क वकिल संग आफ्नो विकल्प छ । एक थप उपयोगी मूल्य को राम्रो मिसिन. साथै सही समाचार छ । असल तपाईं जानकारी बारेमा महत्त्वपूर्ण नियम को सडक र तपाईं बताउँछ जो बिल्कुल व्यवहार हुन सक्छ रूपमा महंगा छ । सही समाचार. तपाईं प्राप्त हुनेछ एक मासिक जानकारी सेवा संग बहुमूल्य अभ्यास सुझाव र रोचक जानकारी को विषय मा 'कानूनी संरक्षण".
वकील - एक सम्मेलन गर्न साथ दिनु डिजिटल परिवर्तन कार्यालयमा दैनिक
वकील विश्लेषण र छलफल, एक पटक-एक-वर्ष महत्त्व र प्रभाव को तीव्र परिवर्तन जीवनको सबै क्षेत्रमा कानूनी पेशा मा
अगाडि ढोका वकील को निःशुल्क प्रदान रोचक, अभिनव आवेदन विकास संग व्यावहारिक उदाहरण - गारंटी देखि मा हेर्न क्रिस्टल बल । होमपेज, ट्विटर, सामाजिक मिडिया, र: के हो, कसरी र किन, के को लागि दृढ छ । र: म के हुँ गर्न अनुमति दिएको छ । सबै वक्ता, पेशेवरों र चिकित्सकहरु छन् - आफ्नो विषय, आफ्नो दैनिक जीवन र आफ्नो व्यक्तिको पेशा छ । सबै सहभागीहरू छन् पेशेवरों र चिकित्सकहरु - खुला छन्, जिज्ञासा भरिएको, र समर्पण को पेशा हो । अध्ययन संचार को विज्ञान मा खाना सम्म को उत्पत्तिभन्दा पहिलेदेखिनै एजेन्सी, बेन्निङ्ग, साथी. सल्लाह र लागि बीस वर्ष, व्यवस्था कम्पनीहरु मा जोड संग"एक वकिल र वकिल एक उद्यमी रूपमा". लेखक को"व्यावहारिक मार्गदर्शन को वकील बजार" ब्लगिंग देखि मा विषयहरू यो, मिडिया, डाटा सुरक्षा र रोजगारीको व्यवस्था छ । देखि उनको आफ्नै व्यवस्था दृढ मा हैम्बर्ग संग यी गतिविधिहरु. संग ठूलो आवेग - मा छ कि सामाजिक मिडिया, एनालग नेटवर्क, वा एक वक्ताले रूपमा लागि गर्ने बीस-पाँच वर्ष मा आफ्नै व्यवस्था दृढ छ, को लागि बीस वर्ष प्राध्यापन गर्न कानूनी पेशा, व्यवस्था र बजार.
कानूनी अनुसन्धान विशेषज्ञ देखि को लागि, र सत्र वर्ष को मामला मा, कानूनी कार्य देखि तीन वर्ष प्रशिक्षण अधिकारी । जाभा प्रोग्रामर, विकास र प्रकाशन को विभिन्न कानूनी अनुप्रयोग एन्ड्रोइड र आइओएस लागि, को एक सदस्य लागि समिति, विकासकर्ता सफ्टवेयर को उपकरण को सृष्टिको लागि एक स्वचालित दस्तावेज हाल लाग्दा आफ्नो पीएचडी को क्षेत्र मा डिजिटलाइजेसन को कानूनी उद्योग र सम्मानित थियो रूपमा एक"महिला को कानूनी प्रविधी". लागि यो जिम्मेवार को अन्त सम्म, मार्च, राष्ट्रपति को क्षेत्रीय अदालत को, प्राप्त, व्यावहारिक अनुभव मा को.
लागि गर्ने बीस वर्ष मा आफ्नै व्यवस्था दृढ, विशेषज्ञ परिवार व्यवस्था वकील कानूनी,-प्रविधी, प्रस्तुति को पेशा को वकील संग, र बिना स्याचुरेसन.
अनुभव को धेरै वर्ष को लागि एक उत्पादन प्रबन्धक रूपमा, कार्यालय सफ्टवेयर र को लागि एक आवेग डिजिटल परिवर्तन ।.
र कानूनी सल्लाह र कानूनी प्रश्न अनलाइन. संग एक वकील सोध्न-एक-वकिल
सल्लाह थियो धेरै बुद्धिमानीर पनि मा पक्षमा थिए भन्ने छैन मागे. तर लागि प्रश्न महत्त्वपूर्ण छन् । कानूनी सल्लाह अक्सर संचालित देखि एक हाथीदांत टावर । हामी विश्वास. को तर एक मुक्त पहुँच न्याय गर्न को लागि सबै को जुनसुकै. शिक्षा. पैसा र सम्बन्ध छ । व्यवस्था र समाजमा निरन्तर परिवर्तन गर्दै.
रसिद हिज्जे, अर्थ, परिभाषा, पर्यायवाची, मूल
सजिलो सन्दर्भ र सही लेख्नुहोस् - पूर्वनिर्धारित शब्दकोश लागि माध्यमिक विद्यालय छ । सुझाव संग काम को लागि खोज, व्यावसायिक तैयार गर्न मदत गर्छ पहल र अनलाइन आवेदन छ । एक सय शब्दहरू लागि बिर्सन पनि धेरै सुन्दर, यो मायालु तैयार को शीर्षक मा रोशनी । डिजिटल 'शब्दकोश' को रूपमा स्थापित हुनेछ मा एक कार्यक्रम को कम्प्युटर, र गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ खोज सीधा लेखन गर्दाअनलाइन संग तपाईं प्रदान व्यापक जानकारी हिज्जे, व्याकरण, र अर्थ को एक शब्द छ । शब्दकोश देखाउँछ उचित प्रयोग साथै उच्चारण र मूल को एक वचन र सूची यसको पर्यायवाची. भने व्याकरण, हिज्जे, शब्द मूल, वा राम्रो शैली: भाषा सल्लाहकारले धारण पृष्ठभूमि मा जर्मन भाषा, महत्त्वपूर्ण नियम माथि एक अनौठो घटना. यहाँ, हामी को अवलोकन प्रदान सरकारी नियम को जर्मन हिज्जे र विराम चिन्ह, साथै उन्नत सुझाव, स्पष्टीकरण, र सिफारिसहरू को सम्पादकीय बोर्ड । अक्सर तपाईं कसरी थाहा छैन एक शब्द लेखिएको छ । त्यसैले, बारम्बार वाक्यहरुको श्रुतीमा केहि त्रुटि प्रवेश, सही लिखित खोजशब्द. यहाँ तपाईं पाउनुहुनेछ, सुझाव र पृष्ठभूमि ज्ञान को जर्मन भाषा, तिनीहरूले आफूलाई डुबाउनु विशेष विषय, वा बस एक मजा भाषा बाहिर प्रयास गर्न खेल । मनोरञ्जनात्मक बारेमा जानकारी जर्मन भाषा, वा बरु जानकारी मा हालको प्रस्ताव छ । हाम्रो समाचार पत्रको सदस्यता. बान्की प्रस्ताव सात हाम्रो प्रख्यात गर्दछ कि हामी तपाईं अनुप्रयोग संग, धेरै अतिरिक्त कार्यहरु जस्तै बुद्धिमान खोज समारोह वा संयोजन र विचलन. यो पुस्तकालय छ अभिनव र सिद्ध सफ्टवेयर आवेदन को शब्दकोश पहुँच लागि, इलेक्ट्रनिक शब्दकोश सामग्री प्रकाशक देखि. पदहरू जर्मन भाषा, पढ्न देखि नमूनों हाम्रो पुस्तकहरू र निबन्धहरू को विषय मा जर्मन भाषा डाउनलोड लागि यस क्षेत्र मा तपाईं प्राप्त हुनेछ बारेमा जानकारी विषयहरू, सामाजिक मिडिया को समाचार पत्र, अनुप्रयोगहरू, र डाउनलोड. तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ मन्त्र- अनलाइन आफ्नो पदहरू, समय बचत गर्न सही हिज्जे र व्याकरण जाँच गर्नुहोस् । वर्षभन्दा, भएको छ निर्णायक अख्तियार लागि सबै प्रश्न मा जर्मन भाषा र हिज्जे छ । यहाँ तपाईं प्राप्त एक आकर्षक अन्तरदृष्टि विषयहरू सम्बन्धित. क्षेत्र मा व्यापार को, हामी टिकट लागि तपाईं हाम्रो वर्तमान प्रकाशक, पूर्वावलोकन, र आदेश र शेयर रेकर्डिङ प्रकारका संकलन भएको छ । यो खण्ड मा, हामी सेवा प्रदान हिज्जे जाँच अनलाइन, भाषा परामर्श, प्राविधिक सहयोग, बिक्रेता क्षेत्र मा र रोचक तथ्य बारे.
को संसाधन आवेदन गर्न सक्छन् धेरै सप्ताह लिन, बनाउन कृपया आफ्नो अनुरोध प्रारम्भिक । तपाईं सूचित गरिनेछ नतिजा बारे आफ्नो आवेदन को साथै कुनै पनि आवश्यक थप कदम ई-मेल मार्फत आफ्नो:खाता ई-मेल ठेगानायदि तपाईं ल्याउन, यो पूरा र हस्ताक्षर आवेदन फारम पनि लेट मा परिणाम हुनेछ अस्वीकृति को आफ्नो आवेदन, अपवाद बिना, (एक फिर्ती सम्भव छैन). तपाईं एक फिर्ती लागि लागू गरेर समय सीमा, तर आवश्यक कागजात सम्झना गर्दै छन्, तपाईं एक दिइनेछ उचित समय पेश गर्न यी कागजातहरू । बैंक डाटा:अन्तरिक्ष, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत डाटा वा अद्यावधिक, यो यो पुष्टि. स्थानान्तरण मात्र सम्भव छ भने, बैंक पुष्टि डाटा अद्यावधिक छ र सही छ । स्क्यान सबै आवश्यक कागजात र तिनीहरूलाई पठाउन रूपमा एक फाइल प्रारूप गर्न अध्ययन स्वीकृति (सम्पर्क फारम - मा प्रकार आफ्नो:खाता ई-मेल ठेगाना.). आवेदन सम्भव छ भने एक फिर्ती लागू आधारभूत र छ भने तपाईं भुक्तानी विद्यार्थी संघ शुल्क, दुई पटक गल्ती गरेर विश्वविद्यालय मा भियना, पुनःनिर्दिष्ट गरिनेछ एक पटक मात्र गर्न विद्यार्थी संघ. यस मामला मा, तपाईं एक फिर्ती अनुरोध मा विद्यार्थी संघ, तर सीधा विश्वविद्यालय को भियना, माथि वर्णन रूपमा.
जिल्ला अदालत ö: जिल्ला अदालत ö
अनावश्यक जोगिन प्रतीक्षा पल्ट, यो आफ्नो ब्याज - विशेष गरी बाहिर कार्यालय को घन्टा संग एक नियुक्ति प्रासंगिक प्रशासक मा एक समझदार र गर्न सिफारिस गरिएको छ । सम्पर्क को लागि व्यक्ति नियुक्ति गर्न को कार्यालय को लागि जिल्ला अदालत. एक कानूनी परामर्श ठाउँ लिन छैनकृपया खातामा लिन आफ्नो समय योजना, जब कि भवन प्रवेश देखि सुरक्षा उपखाडी कारण, नियन्त्रण ठाँउ हो. मा निर्भर गर्दछ, यातायात, यी केही मिनेट लिन सक्छ सबै आगंतुकों हो भनेर सम्झाए हतियार वा अन्य खतरनाक वस्तुहरु मा ल्याए हुन सक्छ अदालत । अदालतले एक एलेवेटर देखि मुख्य प्रवेश को अदालत पुग्न । मा न्यायिक पार्किंग दुई अक्षम पार्किंग रिक्त स्थान उपलब्ध छन् । यो हो पूर्व दर्ता मा यस्तो. सोधे । भुइँमा तल्ला अशक्त शौचालय स्थित छ । को एक सिंहावलोकन बाधा-मुक्त पहुँच को कोर्ट मा र मुद्दा चलाउने व्यक्ति कार्यालय तपाईं पाउन सक्छन् यहाँ. मार्फत यो लिंक पाउन सक्नुहुन्छ जानकारी अनुसार लेखमा तेह्र र चौध सामान्य डाटा सुरक्षा नियम.
जिल्ला अदालत नियमित प्रवेश मा अदालत । यो निर्णय, सिद्धान्त मा, एक न्यायाधीश (§ बीस-दुई) वा एक रजिस्ट्रार मा, केही अवस्थामा, रजिस्ट्रार द्वारा.
साथै, जिल्ला अदालत प्रवर्तन, दिवालियापन लिलाम, र संरक्षणको अदालत र देशमा रजस्ट्री छ । केही मामिलामा छैनन् गरेर बाहिर सबै स्थानीय कोर्ट, तर केन्द्रित गरिएको या त मा विशिष्ट वा एक जिल्ला अदालत हुनेछ । यहाँ केही उदाहरणहरू छन्: कार्यवाही सञ्चालन गरिनेछ मात्र जिल्ला अदालतमा जिल्ला अदालत, जिल्ला अदालतमा -ß, हाले, म्यागडेबर्ग र. संग्रह लागि प्रक्रिया सक्सोनी, सक्सोनी-एन्हाल्ट र थुरिङ्गिया देखि मात्र जिल्ला अदालत, साधारण अदालत को अमेरिका को सक्सोनी-एन्हाल्ट, सक्सोनी र थुरिङ्गिया, सम्पादन गरिएको छ । दर्ता प्रक्रिया मात्रै तोकिएको स्थानीय जिल्ला अदालत केन्द्रीय दर्ता अदालत । यो जान्छ व्यापार, सहकारी र साझेदारी दर्ता र दर्ता को लागि संगत सक्सोनी-एन्हाल्ट. केन्द्रीय प्रवर्तन अदालत मा -ß व्यवस्थापनका लागि जिम्मेवार छ ऋणी गरेको सूची र सम्पत्ति जानकारीको लागि सक्सोनी-एन्हाल्ट. बारेमा जानकारी कार्यहरू को कानुनी अधिकारी, को कार्यान्वयन एक अनिवार्य प्रवर्तन, साथै एक डाउनलोड प्रवर्तन क्रम देख्न, अदालत आकर्षित भइरहेको छ । मा आपराधिक मामला, को अधिकार क्षेत्र गर्न फैली अपराध र अपराधको, को हदसम्म छैन खण्ड बीस-चार को कोर्ट ऐन, अधिकार क्षेत्र को एक उच्च अदालत हुनेछ । यो एक आपराधिक न्याय वा न्यायपीठ अदालत निर्णय, को मिलेर एक व्यावसायिक न्यायाधीश र दुई राख्नु न्यायाधीशहरूले (न्यायाधीशहरु). अपराध अवस्थामा, मुख्यतया यातायात अपराध हो । संघ को शहर र नगरपालिका को जिल्लामा जिल्ला अदालतमा देख्न कृपया, यो पुस्तिका 'न्यायपालिका सक्सोनी-एन्हाल्ट'.
बारे सामान्य जानकारी अनुसन्धान कार्यवाही, आपराधिक कार्यवाही, को कार्यालय को न्यायपीठ वा गर्न अपील मा आपराधिक अवस्थामा, यो पुस्तिका 'जुरी' तपाईं को लागि छ. तपाईं डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ कागजात वा सिधै यो पढाइ । यस गर्न, चयन सोही मेनु वस्तु.
कानूनी सल्लाह Ö हैम्बर्ग - हैम्बर्ग
तर, प्रदान गरेको छ लागि सहायता - हैम्बर्ग तपाईं मदत गर्छ सार्वजनिक गरेर कानुनी जानकारी र सन्दर्भ जंक्शनमा (Ö) यो सलाहकार गर्न बाध्य छन् विशेष गोपनीयता, विशेष तिर अधिकारी र मा Ö तपाईं प्राप्त गर्न मात्र कानुनी जानकारी, तर आवश्यक छ भने, पनि व्यावहारिक मदत र समर्थन माध्यम एक कानूनी युद्धमा अपरिहार्य छ, सल्लाह दिन्छन् Ö को संभावना बारे कानूनी सहायता लागत को कार्यवाही लागत प्राप्त गर्न मद्दत । यो सलाहकार पनि बताउन तपाईं कसरी तपाईं एक पाउन सक्नुहुन्छ योग्य वकील वा एक विशेष वकील आफ्नो विशेष मामला लागि, देखि Ö गर्न सक्दैन तपाईं प्रतिनिधित्व अदालत मागणना गरेको छ, व्यक्तिगत, मा आधारित आफ्नो व्यक्तिगत अवस्था छ । ल्याउन, त्यसैले, आय प्रमाण, प्रमाण को भाडा र मर्मतका भुक्तानी, बीमा, आदि. एक व्यक्ति गणना हुन सार्थक कृपया तपाईं संग ल्याउन कागजातहरू आफ्नो मामला को लागि, उदाहरणका लागि, ठेके, पत्र, सूचनाहरू, र शास्त्र छ । तपाईं यी कागजातहरू व्यवस्था र बाहिर क्रमबद्ध मदत गर्न, सलाहकार र आफैलाई दिन, तपाईं संग एक योग्य सल्लाह छ । एक नियम को रूप मा, यो सल्लाह पालन-अप सहित हुनेछ लागत मा नै कुरा गर्न पाँच दस यूरो । शुल्क कम हुनेछ तीन यूरो भने, आफ्नो आय धेरै कम छ । नगद भुक्तानी गर्न आवश्यक छ, Ö पनि गर्छ कानूनी सल्लाह लागि विशेष जवान मानिसहरू र छोराछोरीलाई ।.
वकील, नागरिकता वकिल, वकील
यो राष्ट्रका जडान एक व्यक्ति कानुनी संग एक विशेष राज्य । को अधिग्रहण को राष्ट्रका मा निर्भर गर्दछ सम्बन्धित राज्य व्यवस्थाअक्सर यो प्रक्रिया नियमित छ यो संविधान । यो राष्ट्रका सबैभन्दा अवस्थामा प्राप्त छ या त द्वारा जन्म वा शक्ति को एक सार्वजनिक कार्य मा सम्मानित जर्मनी, अन्य कुराहरु, लागि अनुरोध प्रवास को योग्य शरीर को प्रशासन, र एक सफल भाषा परीक्षण । जर्मनी मा, नागरिकता ऐन (पुरुष) तय अधिग्रहण को जर्मन राष्ट्रका छ । त्यसैले, जर्मन नागरिकता माध्यम प्राप्त गर्न, जन्म छ जसको विवाह आमाबाबुले, कम से कम एक भाग, जर्मन राष्ट्रका छ । यही लागू हुन्छ मामला मा, को एक अनुसार ग्रहण व्यवस्था को कम्तिमा एक जर्मन दत्तक आमाबाबुले, अपनाए स-साना बच्चा । को मामला मा बिहे नभएको छोराछोरीलाई यो मात्र मामला छ भने आमा जर्मन नागरिकहरु. पनि गर्न सक्छन्, एक जर्मन वा एक जर्मन-विवाह विदेशीहरू गर्न सजिलो भएको छ । जर्मनी मा शुरू, वर्ष मा, छोराछोरीलाई जन्म विदेशी जो आमाबाबुले छैन छ, यो राष्ट्रियता को एक ईयू राज्य वा स्विट्जरल्याण्ड, तर पछि कम से कम आठ वर्ष मा जर्मनी कानुनी जीवन वा एक सदाको सही निवास, पनि प्राप्त हुनेछ जर्मन राष्ट्रका छ । तर समय देखि तिनीहरूले पुग्न आफ्नो उमेर को बहुमत गर्न छ. आफ्नो जन्मदिन कि निर्णय गर्न छ. तिनीहरूले कायम गर्न चाहन्छन् आफ्नो जर्मन राष्ट्रका छ । अन्यथा, यो खो दि्छ । दोहरी राष्ट्रका छ नजोडिएको यस्तो अवस्थामा छ । यो प्रक्रिया छ विकल्प मोडेल भनिन्छ । जातीय जर्मन प्राप्त हुनेछ साथ आफ्नो पनि लिपिबद्ध परिवारका सदस्यहरूले को जर्मन राष्ट्रका संग जातीय जर्मन प्रमाणपत्र । एक पासपोर्ट एक्लै छैन एक पर्याप्त प्रमाण को रोकिराखेको को जर्मन राष्ट्रका संघीय गणतन्त्र जर्मनी । तापनि यो मा सूचीबद्ध नियम, मा पारित, केवल नैशनल्स, पहिचान कार्ड वा नागरिकहरु को एक प्रमाणपत्र को राष्ट्रका छ । कारण ईयू सदस्यता को जर्मन नागरिकहरु पछि युरोपेली संघ सम्बन्धित युरोपेली व्यवस्था पनि छ एक नागरिक संघ को छ । यो राष्ट्रियता को एक ईयू देश, निम्न नागरिकता अवस्थित छ देखि, यूरोपीय संघ सन्धि को नोभेम्बर, शक्ति मा प्रविष्टि छ । संघ नागरिक लाभ, विशेष मा, को मौलिक स्वतन्त्रता भित्र पर्छ. साथै, संघ नागरिक छैन परित्याग गर्न आफ्नो पछिल्लो नागरिकता अनुसार जर्मन व्यवस्था भने राष्ट्रका खरीद गर्न चाहनुहुन्छ. को राष्ट्रका छ विविध कानूनी प्रभाव छ । यो कारण छ. सही छनौट गर्न र अन्य तथाकथित जर्मन मौलिक अधिकार जस्ता चयन गर्न स्वतन्त्रता एउटा पेशा अनुसार आधारभूत व्यवस्था, मात्र जर्मन छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था र निजी अन्तर्राष्ट्रिय कर रूपमा व्यवस्था गर्न राष्ट्रका विजेता को एक भाग को क्षेत्र व्यवस्था गर्न सक्छन्, प्रभाव, अन्य कुराहरु, को सही सम्बन्धविच्छेद र समर्थन वा सम्पत्तिको कर । यो यस सन्दर्भमा, मा पनि जडान संग राष्ट्रका मा, शब्द प्रयोग नागरिकता हो र नागरिकता को निम्न अधिकार र दायित्व एक व्यक्ति । तपाईं एक कानूनी समस्या र देख रहे एक वकील को लागि आफ्नो क्षेत्र मा जो तपाईं सल्लाह गर्न सक्छन् मा सबै विषयमा प्रश्न को विषय मा नागरिकता को एक व्यापक तरिका हो. को मामला मा एक वकील संग, तपाईं सजिलै पाउन सक्छन् यो सही वकील आफ्नो कानूनी समस्या छ । वकील - अग्रणी कम्पनीहरु लागि जर्मनी मा आधुनिक दिन कानूनी सल्लाह र कानूनी.
छनौट यसपछि, मा इच्छित स्थान मा आफ्नो क्षेत्र, र तपाईं प्राप्त हुनेछ एक सूची को कम्पनीहरु छ कि को विषय मा राष्ट्रका विशेष ज्ञान छ । बारेमा विस्तृत जानकारी आफ्नो चयन वकील वा आफ्नो चुनिएको वकील, तपाईं पाउन सक्छन् मा व्यक्तिगत दृढ प्रोफाइल.
कर परामर्श मा व्यापारिक सहयोग मा कर मामिलामा । कर सल्लाह को भाग होसम्बन्धित व्यावसायिक कार्यहरू को कर व्यवस्था. हेरचाह छ जो एक महत्त्वपूर्ण समुदाय सम्पत्ति छ । एक अनुसार § को असीमित व्यापारिक सहयोग कर मात्र कर सलाहकारहरु. लेखा परीक्षकहरुलाई र लेखा परीक्षकहरुलाई अनुमति को प्रावधान को कर परामर्श ऐन एक राज्य मा प्रतिबन्ध चयन गर्न स्वतन्त्रता एउटा पेशा (कला.
छ । को आधारभूत व्यवस्था).
त्यस्तै मास्टर अभावको मा शिल्प छ । यो प्रतिबन्ध को व्यावसायिक स्वतन्त्रता को जायज छ द्वारा सुरक्षा को एक महत्त्वपूर्ण समुदाय. राम्रो र सुरक्षित कर राजस्व लागि आवश्यकता यस्तो राज्य हस्तक्षेप भित्र छ युरोप मा. र कहिले काँही प्रदान भौतिक को लागि चर्चा मा विधायी प्रक्रिया छ. जो केन्द्रित गरेर को कर सलाहकार र व्यावसायिक संघ को लेखाकार अन्य पक्ष मा छ ।.
दर्ता । क्रेडिट कार्ड बिना वार्षिक मर्मत
क्रेडिट कार्ड भएका छन् एकदम सुविधाजनक उपकरण को व्यवस्थापनका लागि धन । तिनीहरूले मानिन्छ प्रकार को ऋण दिन सजिलो र सुविधाजनक छ । तापनि व्यापक चयन, एक धेरै लोकप्रिय क्रेडिट कार्ड कुनै वार्षिक मर्मतका छलफल गरिनेछ थप लेख माप्रयास राख्न नियमित ग्राहकहरु र नयाँ, धेरै बैंक विकास गर्दै नयाँ अवस्था को मर्मतका लागि क्रेडिट कार्ड. सबै बैंक यो फरक छ, तर यो विकल्प दिन्छ उधारकर्ता गर्न सही छैन, लाग्छ, एक जबकि लागि बारेमा आर्थिक समस्या छ । क्रेडिट कार्ड कुनै वार्षिक शुल्क सेवा छ, अधिक र अधिक महत्त्वपूर्ण बन्ने, हुनत यो निष्कर्ष अनुबंध को, तपाईं छ गर्न बैंक को ग्राहकहरु धेरै ध्यान छ । सबै भन्दा पहिले, यो कार्ड हुन सक्छ, यो अवधि संग एक उच्च ब्याज दर परे चासो-मुक्त.
दोश्रो, मुक्त मर्मतका लागि मात्र पहिलो वर्ष प्राप्त पछि कार्ड लिन सक्छन् । र तेस्रो कुरा, एक उच्च प्रतिशत लागि नगद को फिर्ती, रूपान्तरण, र यति मा । क्रेडिट कार्ड बिना वार्षिक मर्मतका, यसको विपरीत, अन्य, एक न्यूनतम सेट को विकल्प छ । अर्को शब्दमा, यो छ दिइएको बैंक । शायद हुनेछ को समाप्ति को पछि कार्य को यस्तो एक नक्शा मा या त को वार्षिक मर्मतका पहिले नै छ को एक विस्तृत सीमा भेंट विकल्प । कार्ड संग, कुनै मर्मतका, र विज्ञापन को बैंक नयाँ ग्राहकहरु आकर्षित गर्न अक्सर छ, त्यसैले, यो गर्न लाभदायी छ कसरी बुझ्न यो तिनीहरूलाई लाभप्रद छ आफ्नो प्रयोग: नगद, क्रेडिट कार्ड बिना वार्षिक मर्मतका, तपाईं लगिन गर्न सक्छन् माध्यम, यो व्यक्तिगत व्यवहार मा एक वित्तीय संस्था वा आधिकारिक वेबसाइट मा बैंक यति भनेर अनलाइन.
दर्ता लागि मात्र आवश्यक छ, एक पासपोर्ट छ, तर यो मामला मा, माथिल्लो सीमा लागि नगद सानो छ । जब एक व्यक्ति छ बनाउन पेरोल कार्ड को एक विशेष बैंक, अनुरोध गर्न क्रेडिट कार्ड । छ एक विकल्प छ कि, यो चासो दर यस मामला मा कम हुनेछ, र वार्षिक मर्मत उपलब्ध छैन । हामी मा हेर्न, केही प्रस्ताव देखि विभिन्न बैंक, जहाँ डिजाइन कार्ड बिना वार्षिक मर्मतका । पाठ्यक्रम छन् अन्य प्रस्ताव देखि अन्य वित्तीय संस्थाहरूको । प्रत्येक मामला मा, उधारकर्ता आफूलाई छनौट पर्छ भन्ने अवस्था फिट उहाँलाई सबै भन्दा राम्रो छ । क्रेडिट कार्ड को बचत बैंक बिना वार्षिक सेवा चढाएको छ लागि भनेर नियमित ग्राहकहरु पहिले नै एक डेबिट कार्ड, वा ग्राहकहरु । दुवै अवस्थामा, यो बिना कार्ड मर्मतसम्भार संग व्यक्तिगत नगद सीमा । लगभग एउटै गुण र कार्ड 'दिन जीवन'.
सानो मतभेद मा वर्गीकरण र सीमित प्रश्न गर्न पैसा प्रति दिन. विशेष रोचक छ को नक्शा मा निर्भर गर्दछ, आफ्नो प्रकार, ग्राहक प्राप्त हुनेछ पछि भुक्तानी को आफ्नो खरीद को लागि प्रत्येक पचास यूरो देखि पाँच सय एक,"किलोमिटर".
प्रस्तुति को नक्शा 'गतिशक्ति' गर्न पट्टी एक विभिन्न प्रकार छ । आफ्नो प्रयोग निश्चित अवस्था छ । पनि रोचक छ यो नक्शा को 'युवा'.
तपाईं सकिन्छ स्वीकृत नगर्ने विद्यार्थीहरूको लागि एक नियमित आय । को नोट थियो, डिजाइन गर्न नेतृत्व गर्न भुक्तान लेनदेन । भने, उधारकर्ता नगद उद्देश्य, उहाँले भुगतान गर्न तयार हुनुपर्छ को एक आयोग, तीन सात, तर पनि गुमाउन चासो-मुक्त अवधि । को नगद प्रयोग संग, स्वीकार बैंक नोट्स हुनेछ, विशाल भन्दा भुक्तान र महान् आयोग. त्यहाँ बैंक हो भनेर प्रस्ताव भुगतान क्रेडिट कार्ड संग. तर यस्तो सेवा छ, एक ठूलो हदसम्म गर्न उपलब्ध विशेषाधिकार ग्राहकहरु, को सहभागीहरू को पेरोल र कर्मचारीहरु को बैंक, यो विकल्प प्रदान गर्दछ.
को सूची प्रादेशिक विवाद
यस को एक सूची छ निरन्तर प्रादेशिक विवाद
विवादित प्रादेशिक दावा बीच अमेरिका वा अन्य क्षेत्रमा । अंटार्कटिक सन्धि को. जुन.
स्थापित. यो रूपरेखा को व्यवस्थापनका लागि अन्टार्कटिका माध्यम अनुबंध र साझेदारी गर्न । यो सबै प्रादेशिक दावा को देशहरू मा क्षेत्रमा लामो रूपमा. अनुबंध मान्य छ र देश छ एक करार साथी (प्रत्येक देश हुन सक्छ. कुनै पनि समय मा टपकन). तर.
यो अझै पनि कल्पना हुर्काउन गर्न प्रादेशिक दावा मा क्षेत्र देखि.
यो छ छैन एक व्यक्ति अमेरिका ।.
वाच न्यायिक अधिकारी सेवा - वा क्षमता लागि अधिकारीहरु को सरल सेवा मा प्रशासन को न्याय को ल्यान्डर जर्मनी को संघीय गणतन्त्र को अपवाद संग, हेस्स र थुरिङ्गिया, जहाँ न्यायिक अधिकारी बीचमा गर्न सेवामा, उत्तर राइन-वेस्टफेलिया को सजिलो सेवा. चार क्यारियर समूह: साधारण, मध्यम, उच्च र वरिष्ठ सेवा देखि.
जुलाई मा दुई क्यारियर समूह पुन सङ्गठित । समावेश गर्न नयाँ श्रेणी को दुई विद्यमान चलिरहेको ट्रयाकहरू को माथिल्लो र उच्च सेवा समूह को एक सजिलो र मध्यम सेवा । भित्र को श्रेणी यो निर्भर र प्रशिक्षण मा विभिन्न कार्यालय छ । एक न्यायिक अधिकारी अदालतमा र अधिकारीहरु को सरल सेवा, वा कुनै संग यी कार्यहरू, कर्मचारीहरु । अधिकारीहरु को न्यायपालिका को घडी मालिकको सेवा, जेल सेवा, सेना देश र शक्ति, को व्यायाम मा सार्वजनिक अख्तियार को रूपरेखा मा अवस्थित नियमहरू र नियमहरु पार्छन् प्रत्यक्ष शक्ति । तिनीहरूलाई को कार्यान्वयन सार्वभौमिकता सरुवा कानूनी कार्यहरू भित्र न्यायपालिका छ । तैपनि तपाईंलाई पनि हुन सक्छ सरुवा गर्न अन्य कार्यहरू को अन्य क्यारियर समूह । विवरण मा नियमित सम्बन्धित न्यायपालिका प्रणाली को देश माथि सामान्यतया अपनाए रूपमा लागू नियमहरु को को न्याय को देशहरू । आफ्नो कार्यहरू समावेश हुनेछ सत्र, प्रस्तुति, सुरक्षा, र आदेश को सेवा । त्यसैले तिनीहरू नेतृत्व गर्न कैदी भेटघाट र सभा अदालत र गार्ड.
लागि भाग (गैर-संघीय) तपाईं इनपुट नियन्त्रण. विशेष मा, को प्रवर्तन शान्ति र आदेश मा तपाईं सम्म छ अदालत र राज्य वकील गरेको सापट भवन, आफ्नै अनुसार अभिनय (मा लागि प्रदान प्रशासनिक प्रवर्तन को कानून र कानूनी नियमहरु को देशहरू) नियन्त्रण भन्दा को समय र निर्देशन को. को वैधता आवेदन को प्रत्यक्ष, को नियम द्वारा, को अर्थ सरल शारीरिक हिंसा वा माध्यम को प्रयोग एक हात वा घन्टी व्यक्त नियम को माथि-उल्लेख व्यवस्था. यो आवेदन को प्रत्यक्ष को न्यायिक अधिकारी यस्तै छ ती प्रहरी । अख्तियार को प्रयोग को लागि प्रत्यक्ष वाध्यताले फैली मात्र गर्न सम्बन्धित सेवा भवन र सम्बन्धित बाहिरी क्षेत्र । अपवाद यो को कार्यान्वयन छ"प्रदर्शन आदेशहरू"(को आदेश अदालत विरुद्ध अदालतले मिति भएको छैन प्रकाशित साक्षी नागरिक कार्यवाही मा).
को हो जो द्वारा प्रतिष्ठित प्रहरी अधिकारीहरू, को कार्यान्वयन प्रक्रिया (मा आपराधिक कार्यवाही).
मा न्यायिक अधिकारी पनि सेवा को लागि को कागजातहरू, साथै मौखिक प्रसारण सेवा संचार, जिम्मेवार छ । केही राज्यहरु मा, न्यायिक अधिकारी को क्रोध उत्पन्न गर्न वाला स्प्रे (जस्तै धेरै. डी मरिच स्प्रे) वा एक (- प्रयोग स्टक छोटो-) वा यस्तै प्रहरी संग टोंगा सुसज्जित, उदाहरणका लागि, शहर को. साथै, यो पोस्ट तपाईं सम्म छ, ज्यादातर इनपुट र आउटपुट व्यवस्थापन, साथै यो फाइलहरू, परिवहन र वितरण, र कुनै पनि आवश्यक दोहराव. पनि तपाईं गर्न सकिन्छ व्यवस्थापन फाइलहरू, र बाहिर र विनाश फाइलहरू को सरुवा गरेको छ । झन्, तिनीहरूले धेरै यस्तै कार्यहरू देखि, लागत कारण, मुख्य सरकारी घर मास्टर (संघीय एकाइ थिए) मुक्ति । त्यसैले, यो माग मा काम विज्ञापन सामान्यतया एक पूरा शिल्प प्रशिक्षण । केही देशहरुमा, नियन्त्रण हुनुपर्छ हटाउन द्वारा न्याय को लागि अदालत निश्चित संरक्षित हतियार थिए, जो द्वारा जफत अधिकारीहरूले । साथै, थुप्रै अभियोजन कार्यालय सामान्यतया, प्रदर्शनकारी भण्डारण छन् र पनि, न्याय को मास्टर नियन्त्रण व्यवस्थित छन्. यसबाहेक, तिनीहरूले पनि रूपमा प्रयोग गर्न कम्पनी कार चालक, कार मर्मतका लागि जिम्मेवारी छ । प्रशिक्षण को न्यायिक अधिकारी को जिम्मेवारी छ देशका सार्वभौमिकता र एकता छैन यस कारण लागि, राष्ट्रव्यापी. जताततै बराबर को अवधि प्रशिक्षण नियमित छ, यो छ महिना छ । यो दुवै समावेश सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो रूपमा व्यावहारिक प्रशिक्षण सामग्री । देश मा निर्भर गर्दछ, सैद्धान्तिक प्रशिक्षण दिइन्छ या त कोर्ट र अभियोजन कार्यालय वा शैक्षिक संस्थाहरु को न्यायपालिका छ । निम्न तालिका दिन्छ एक सिंहावलोकन छ । मा सरल सेवा, पेसा परीक्षण ठाँउ लिन्छ, बरु, क्षमता हुन्छ एक निश्चित स्थिति को टाउको द्वारा प्रशिक्षण । मा -ü, क्षमता के यो राष्ट्रपति द्वारा को योग्य र उच्च क्षेत्रीय अदालत इंगित गरे को रिपोर्ट गर्न शिक्षा सेवा र तीन लिखित काम, उम्मेदवार उत्पादन प्रशिक्षण समयमा, उन्मुख छ । योग्यता छ छैन सम्मानित, तयारी विस्तार गर्न छ सेवा गर्न (को अधिकतम एक वर्ष), यो सामग्री को एक राम्रो कटिबद्ध छन्.
यदि तपाईं समावेश सेवा वस्त्र र वर्दी, साथै यो उपकरण को लागि आवेदन को प्रत्यक्ष, छ यहाँ पनि जर्मनी मा, विशेष गरी कपडे, एक बरु.
केही देशहरू प्रदान लागि सब्सिडी को खरीद सेवा वस्त्र, जबकि अन्य देशहरुमा को कान्स्टेबुल उनको प्राप्त गर्न वर्दी देखि सेवा मानिसहरू । तल तालिकामा, मतभेद हो जांच मा विस्तार. सामान्य मा, अधिकारीहरु को सरल सेवा मा सारांशित सकिन्छ न्यायपालिका रूपमा कान्स्टेबुल. सामान्य मा, उहाँले पूरा महिना प्रिपेरेटरी सेवा रूपमा एक"न्याय माथिल्लो माथि सामान्यतया दावेदार". संग अधिग्रहण मा आधिकारिक सम्बन्ध मा नमूना, उहाँले त्यसपछि प्राप्त सेवा नाम को"न्याय, सर्जन्ट छ । ए"(नियुक्ति). यो नमूना अनुपात हुनेछ कम्तीमा एक वर्ष र एक आधा र पूरा भएको छ संग छान्नुको को अधिकारीहरु, र व्यापक मा उमेर सीमा संग अधिग्रहण मा सरकारी कर्मचारी संग जीवन कार्यकाल हो । अधिकारीहरु हुनेछ भालु को शीर्षक न्याय, टाउको प्रमुख (ग्रेड). अधिक पोस्ट को न्याय मुख्य मास्टर, र पहिलो न्याय मुख्य कान्स्टेबुल (एक पाँच र एक) माथि. त्यतिन्जेल, नयाँ शीर्ष-को-को कार्यालय अनुसार, एक सात (लागि, सक्सोनी, सक्सोनी-एन्हाल्ट, थुरिङ्गिया र -पश्चिमी पोमेरानिया.) मा शुरू थिए परीक्षण-मुक्त प्रयोग को, छ । क्षमता ज्यादातर थिए (न्यायिक सञ्चालन मुख्य सचिव) को न्याय, मुख्य सचिव मा प्रशासनिक सेवा । मा (न्याय सञ्चालन प्रमुख सचिव) र हेस्स (न्यायिक सचिव मा प्रशासनिक सेवा), र पनि अप गर्न. यी कार्यालयहरू हुन सक्छ, स्तर अनुसार उपयुक्त र परिवहन सेवा पटक प्राप्त गर्दै. सबै भन्दा कम ग्रेड तीन र एक, जो, छैन टाढा स्थित देखि न्यूनतम वेतन मा, उत्तर राइन-वेस्टफेलिया दाबी अनुसार. जुलाई, आठ, र त्यसपछि सुरु न्यायिक अधिकारी वर्गीकरण संग. नौ दस, को रूपमा जनवरी, हुर्काउन को मानक को एक ग्रेड तीन एक ग्रेड चार । प्रवेश रूपमा कार्यालय अब देखाइएको त्यसपछि मा यो राज्य अनुसार यातायात प्रकाश सहकार्यको सम्झौता को लागि, ग्रेड एक तीन । को विवरण को लागि, पत्रिका देखि सेप्टेम्बर -. हेर्न पुरानो छ । एघार एक अपवाद छ. यो न्यायपालिका, उठ सेवा यहाँ सम्म, यो वर्ष, सबै अधिकारीहरु को सरल सेवा मा बढुवा थिए स्थानीय छ । यो शायद कारण को अवकाश पेन्सन मा, किनभने सबै अन्य कार्यालय को सेवा, छैन पनि न्यूनतम आपूर्ति दर (धारा चौध, छ । सेट को चार, तीन अधिकारीहरु पेन्सन ऐन) को, पुग्न थियो.
आँखा परीक्षण लागि ड्राइभिङ लाइसेन्स आँखा परीक्षण तस्बिरहरू
जसले एक चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न चाहन्छु, आवश्यकता एक आँखा परीक्षण । किनभने, को पाठ्यक्रम, तपाईं हेर्न सक्षम हुन राम्रो गर्न, सार्न सुरक्षित बाटोमा । जसले कुनै समस्या छ, संकेत चिन्न, पढ्न सडक नाम, वा अर्थ बताउनु कसरी संकेत को अन्य सडक प्रयोगकर्ता सही, आफूलाई र अरूलाईबस माथि बढ्दै, जवान मान्छे चाहँदैनन् समस्या संग अक्सर छ । प्रयोग को एक दृश्य सहायता (चश्मा वा सम्पर्क लेंस) को लागि धेरै उमेर मा मात्र, तर पनि. त्यसैले, धेरै द्वारा धोखा पकडने तरिका । को अधिग्रहण लागि एक ड्राइभिङ लाइसेन्स मा यो सेटिङ, तथापि, छ स्वीकार्य छैन । त्यसैले, व्यवस्थापिका आवश्यक छ एक दृष्टि परीक्षण को लागि एक चालकको लाइसेन्स, जुनसुकै वर्ग, आवश्यक हुनेछ.
यो आँखा परीक्षण तपाईं प्रदर्शन गर्न सक्छन् अनलाइन, तर केवल एक अधिकृत चश्मा बनाउने व्यक्ति छ । एक अनलाइन आँखा परीक्षण भने, बाहिर सही - प्रदान गर्न सक्छन् मात्र एक छाप छ । लागि अख्तियार लाइसेन्स, एक लिखित पुष्टि तपाईं कि बाहिर एक दृष्टि परीक्षण मा एक चश्मा बनाउने व्यक्ति गरेको छ । व्यवस्थापिका कटिबद्ध छ लागत लागि ड्राइभिङ लाइसेन्स आँखा परीक्षण ठीक छ । यो विवरण बाध्य छन्, सिद्धान्त मा, सबै को चश्मा बनाउने व्यक्ति पनि भने, केही खोजे, केही सेन्ट वा यूरो मा यो छ । खण्ड अन्तर्गत को आज्ञा ('मात्रा को लागि शुल्क उपाय मा सडक परिवहन') बाहिर सेट लागत, यूरो. पूर्ण तपाईं बोली त.
लागि लाइसेन्स ड्राइभिङ आँखा परीक्षण तिर्न । तपाईं चाहनुहुन्छ भने गणना गर्न एक चश्मा बनाउने व्यक्ति अधिक जानकारी को लागि, कृपया खण्ड को बोली. एक नम्बर को थिए मा विकसित बोर्डहरू, चश्मा बनाउने व्यक्ति शो मा सही दूरी छ । एक विषय रूपमा यो आवश्यक छ बताउन के, एक देख्न सक्छौं । धेरै लागि अधिक महत्त्वपूर्ण चालकको लाइसेन्स छ कि तपाईं देख्न सक्छौं ठिक छ । लागि दृश्य आँखा परीक्षण विभिन्न छन् प्यानल. सबै अवस्थामा, यो तथ्याङ्कले मा शीर्ष पंक्ति धेरै ठूलो हो र हेर्न सजिलो छ । प्रत्येक श्रृंखला सहित, आकार । लागि चश्मा बनाउने व्यक्ति एकदम, यो प्रश्न माथि छ जो नम्बर को परीक्षण विषय पत्ता लगाउन सक्छन्. ठिक छ । मात्र छल्ले चील यहाँ छ उदाहरण को भिसा-एक परीक्षण मा प्रयोग गरिन्छ कि एक नियम: को दर्शन संग परीक्षण. यदि तपाईं ड्राइभिङ्ग गर्दै छन्, छोटो, टाढा- वा (वा, यदि लागू, पनि यो उमेर सम्म प्रभावित-), तपाईं को आवश्यकता को लागि कार दृश्य सहायता । नेत्र रोग विशेषज्ञ वा त्यसपछि निर्धारण गर्छ कि यो परीक्षण पारित छैन. मामला मा तपाईं आवश्यक पहिलो प्राप्त चश्मा को एक जोडी पहिले, तपाईं लागि लागू गर्न सक्नुहुन्छ एक चालक अनुमतिपत्र, छ । यो हुन सक्छ एक जोडी को चश्मा तर पनि सम्पर्क लेंस क्रम मा हो. कि तपाईं ड्राइव गर्न आवश्यक एक दृष्टि, यो सूचीबद्ध गरिनेछ मा लाइसेन्स । को मामला मा एक यातायात नियन्त्रण (वा, उदाहरणका लागि, को घटना मा एक दुर्घटना छ) मामला जांच गरिनेछ ध्यान । तपाईं ड्राइव गर्न अनुमति, त्यसैले, कहिल्यै बिना दर्शन, यदि यति मा यसो लाइसेन्स. छ जो ड्राइभिङ लाइसेन्स, हुनुपर्छ जाँच गर्न मात्र आफ्नै सुरक्षा, नियमित रूपमा एक आँखा परीक्षण मा चश्मा बनाउने व्यक्ति, कि मान छैन बिग्रन । तर ज्यादातर जिम्मेवारी को अर्थमा बढ्छ भन्दा वर्ष.
रूपमा लेन्स चश्मा उपयुक्त हो (मा निर्भर को अपवर्तनी त्रुटि को एक पढाइ चश्मा, दूरी, चश्मा वा) वा सम्पर्क लेंस.
गर्न चाहने ती मा सबै, कुनै दर्शन, सूचित गर्न सक्छन्, आफूलाई को विषय बारे. उद्देश्य पत्ता लगाउन एक रातो-हरियो-कमजोरी (. दस प्रतिशत पुरुष जनसंख्या) एक रातो-हरियो-कमजोरी आउँछ विभिन्न. सबैभन्दा प्रभावित हुनेछ देख्न रङ रातो र हरियो, छैन त उज्ज्वल, तर बरु रूपमा. प्रभावित छ जो एक रातो-हरियो कमजोरी, तपाईं अझै पनि गर्न सक्छन् खरीद लाइसेन्स. एक चश्मा वा विशेष निर्धारण चश्मा यो छैन (वा मात्र अनुसन्धान मा). यहाँ एउटा उदाहरण छ को एक रंग दर्शन परीक्षण: किन यो महत्त्वपूर्ण छ चिन्न सक्षम रंग । तपाईंलाई थाहा छ, उदाहरणका लागि, यदि एक चमकती प्रकाश, छ रातो वा नीलो । ब्रेक रोशनी को पछि मा पूर्ववर्ती वाहन रातो छन्, जबकि प्रकाश को उल्टो छ -र-सेतो । सामान्यतया, यो प्रकाश मा यातायात रोशनी स्पष्ट छ: शीर्ष रातो छ, तल हरियो छ । तर के छ भने एउटा मात्र दीपक उपस्थित छ, जो छ या त रातो वा हरियो.
यस हुँदैन सडक मा, मामला भए तापनि, तर गर्न सक्छन् मा उत्पन्न विशेष परिस्थितिमा (उदाहरण, निर्माण साइटहरु, पार्किंग गैरेज). अधिक रंग परीक्षण तपाईं गरौं सक्छन् चालक अनुमतिपत्र आँखा परीक्षण लागि दुवै आँखा डाक्टर वा चिकित्सा अधिकारी, साथै मा एक चश्मा बनाउने व्यक्ति गरेको छ । सामान्य मा, यो प्रतीक्षा समय मा डाक्टर छन्, धेरै भन्दा लामो मा चश्मा बनाउने व्यक्ति दोकान कुना वरिपरि छ । छन्, बस एक धेरै अधिक भन्दा.
यो यसैले लिन उचित चालकको लाइसेन्स आँखा परीक्षण गर्दा चश्मा बनाउने व्यक्ति बनाउन । बारे जानकारी हेर्न, दर्शन, परीक्षण सबै प्रकारका अप्टिकल, साथै कलात्मक तस्बिरहरू । कृपया पनि भ्रमण आँखा परीक्षण तस्बिरहरू.
बिलिङ, हिज्जे, अर्थ, परिभाषा, पर्यायवाची
सजिलो सन्दर्भ र सही लेख्नुहोस् - संग पूर्वनिर्धारित शब्दकोश लागि माध्यमिक विद्यालय छ । सुझाव संग काम को लागि खोज, व्यावसायिक तैयार गर्न मदत गर्छ पहल र अनलाइन आवेदन छ । सय शब्दहरू, बिर्सन पनि धेरै सुन्दर, यो मायालु तैयार को शीर्षक मा रोशनी । डिजिटल 'शब्दकोश' को रूपमा स्थापित हुनेछ मा एक कार्यक्रम को कम्प्युटर, र गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ खोज सीधा लेखन गर्दाअनलाइन संग तपाईं प्रदान व्यापक जानकारी हिज्जे, व्याकरण, र अर्थ को एक शब्द छ । शब्दकोश देखाउँछ उचित प्रयोग साथै उच्चारण र मूल को एक वचन र सूची यसको पर्यायवाची. भने व्याकरण, हिज्जे, शब्द मूल, वा राम्रो शैली: भाषा सल्लाहकारले धारण पृष्ठभूमि मा जर्मन भाषा, महत्त्वपूर्ण नियम माथि एक अनौठो घटना.
यहाँ, हामी को अवलोकन प्रदान सरकारी नियम को जर्मन हिज्जे र विराम चिन्ह, साथै उन्नत सुझाव, स्पष्टीकरण र सिफारिसहरू को सम्पादकीय बोर्ड । अक्सर तपाईं कसरी थाहा छैन एक शब्द लेखिएको छ । त्यसैले, बारम्बार वाक्यहरुको श्रुतीमा केहि त्रुटि प्रविष्ट छन् जो मा गर्न नेतृत्व गर्नुपर्छ सही लिखित.
यहाँ तपाईं पाउनुहुनेछ, सुझाव र पृष्ठभूमि ज्ञान को जर्मन भाषा, तिनीहरूले आफूलाई डुबाउनु विशेष विषय, वा बस एक मजा भाषा बाहिर प्रयास गर्न खेल । मनोरञ्जनात्मक बारेमा जानकारी जर्मन भाषा, वा बरु जानकारी मा हालको प्रस्ताव छ । हाम्रो समाचार पत्रको सदस्यता. बान्की प्रस्ताव सात हाम्रो प्रख्यात गर्दछ कि हामी तपाईं अनुप्रयोग संग, धेरै अतिरिक्त कार्यहरु जस्तै बुद्धिमान खोज समारोह वा संयोजन र विचलन. यो पुस्तकालय छ अभिनव र सिद्ध सफ्टवेयर आवेदन को शब्दकोश पहुँच लागि, इलेक्ट्रनिक शब्दकोश सामग्री प्रकाशक देखि हामी तपाईं प्रदान विशेष पदहरू जर्मन भाषा, पढ्न देखि नमूनों हाम्रो पुस्तकहरू र निबन्धहरू को विषय मा जर्मन भाषा डाउनलोड लागि. यस क्षेत्र मा तपाईं प्राप्त हुनेछ बारेमा जानकारी विषयहरू को सामाजिक मिडिया, समाचारपत्र, अनुप्रयोगहरू, र डाउनलोड. तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ मन्त्र- अनलाइन आफ्नो पदहरू, समय बचत गर्न सही हिज्जे र व्याकरण जाँच गर्नुहोस् । वर्षभन्दा, भएको छ निर्णायक अख्तियार लागि सबै प्रश्न मा जर्मन भाषा र हिज्जे छ । यहाँ तपाईं प्राप्त एक आकर्षक अन्तरदृष्टि विषयहरू सम्बन्धित. क्षेत्र मा व्यापार को, हामी टिकट लागि तपाईं हाम्रो वर्तमान प्रकाशक, पूर्वावलोकन, र आदेश र शेयर रेकर्डिङ प्रकारका संकलन भएको छ । यो खण्ड मा, हामी सेवा प्रदान हिज्जे जाँच अनलाइन, भाषा परामर्श, प्राविधिक सहयोग, बिक्रेता क्षेत्र मा र रोचक तथ्य बारे.
सामान्य जानकारी मा एक खरीद प्रक्रिया
यो सीमा को जायदाद ठूलो छतर पनि प्रदान गर्दछ देखा कि मा पहिलो नजर. धेरै सस्तो छैन रूपमा लाभदायी हुनेछ जस्तो लाग्छ । को मूल्य को एक सम्पत्ति छैन निर्धारित निःशुल्क. बजार मा जानकारी को वर्ग मीटर मूल्य तपाईं प्राप्त हुनेछ लागि. अचल सम्पत्ति दलाल.
अचल सम्पत्ति एजेन्ट
वा विशेषज्ञहरु. एक बाध्यकारी 'मूल्य सूचकांक' अवस्थित छैन । सम्झना गर्न माग प्रमाणित देखि निकालन देशमा दर्ता. सबै अधिक त. किनभने. विशेष मा. पुनर्विक्रय गुण सामान्यतया बेचे बिना एक ग्यारेन्टी लागि भौतिक दोष । आफैलाई सोध्नुहोस्: किन यो मालिक को मालिक को सम्पत्ति बेच्न चाहन्छ. जाँच गर्नुहोस् कि सम्पत्ति को मूल्य पनि दिइएको भविष्यमा वा कि आशा गर्न मान हानि (कारण निर्धारित उद्योग वा सडक निर्माण परियोजनाहरू) तपाईं परिभाषित प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ कि सम्पत्ति आफैलाई. वा तपाईं कि सोच को भाडा ।.
खरीद को लागि राजधानी घर मालिक - सम्पत्ति
तपाईं के थाहा छैन, एक धेरै को घर मालिक लागि, तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन् मदत संग एक अचल सम्पत्ति राजधानी (राजधानी खरीद), र पनि अन्य उद्देश्य, एक बन्धकी मा (घर धितो, बन्धकी घर मा)पैसा देखि सरुवा भएको छ, एक बैंक गर्न आफ्नो खाता जाँच. चाहे तपाईं खरीद छौं नेतृत्व गर्न एक कार वा बस लागि पैसा नवीकरण लागि आवश्यक एक प्रमाण को यो (अर्थ: तपाईं पेश गर्न आवश्यक को अन्त मा कुनै पनि ईनभ्वाईसहरू वा स्वीकृति द्वारा राखने), कि तपाईं को आवश्यकता तिर्न बन्द शासकका वा प्राप्त गर्न क्षतिपूर्ति, खर्च धेरै सम्भव छ ।. उदाहरण: तपाईं क्रेडिट, एक कार, एक व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट को एक लाइन र आवश्यक हुनेछ पुनर्निमाण गर्नु आफ्नो घर छ । छ, थप ब्याज दर लक म्याद लागि आफ्नो घर ऋण । त्यसपछि तपाईं प्रतिस्थापन गर्न सक्छन् सबै ऋण र एक बन्धकी पुनर्वित्त. सबै ऋण त्यसपछि प्रतिस्थापन र, सामान्य मा, मासिक दर भन्दा कम छ. उदाहरण: तपाईं उधारो गर्न चाहनुहुन्छ विरुद्ध आफ्नो घर बिना एक चलानी र आधुनिक बनाउनु, देखि केही सेवाहरू द्वारा प्रदान गर्न सकिन्छ मदत, र तपाईं चाहनुहुन्छ किन्न भवन सामाग्री आवश्यक छ । किन कि तपाईं छ बन्दोबस्त बैंक संग, पनि समय- छ । तपाईं बस प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ मुद्रा को सरुवा गर्न आफ्नो खाता. उदाहरण: तपाईं एक सम्पत्ति (घर वा) र चाहनुहुन्छ उधारो मा यो सम्पत्ति किनभने तपाईं आवश्यक पैसा विदेश किन्न एक छुट्टी सम्पत्ति (घर वा कुटीर) र वित्त गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो परियोजनाहरु सजिलै. उदाहरण: तपाईं एक ऋण-मुक्त घर वा आफ्नै घर र तपाईं उधारो गर्न चाहनुहुन्छ, एक बन्धकी संग.
पैसा तपाईं को आवश्यकता हुनेछ एक यात्रा गर्न संसारभरि कारोबार, किन्न एक मोबाइल घर, वा समर्थन गर्न बच्चाहरु संग केही पैसा । तैपनि, यो एक दर्जा को बैंक, बीमा कम्पनीहरु, राष्ट्रिय बैंक वा बचत बैंक सम्पूर्ण विभिन्न छ । सबैभन्दा वित्तीय संस्थाहरूको प्रदान छैन यस प्रकार को राजधानी खरीद को सन्दर्भमा एक बन्धकी.
किन यो यति छ धन्यवाद कम्पनी नीति छ । तपाईं उधारो गर्न सक्छन् विरुद्ध अवस्थित सम्पत्ति र को मामला मा केही बैंक वित्त । हामी प्रयोग गर्न सक्छन् तपाईं तर आफ्नो वित्त गर्न इच्छा भन्न कि वा छैन यो सम्भव छ गर्न जीत एक बैंक लागि आफ्नो वित्तपोषण संग एक बंधक ऋण उधारो गर्न, विरुद्ध आफ्नो घर वा सम्पत्ति छ । यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने आफ्नो अवस्थित सम्पत्ति, भवन षड्यन्त्र, वा, र एक बन्धकी देशमा मा दर्ता, यो केवल एक सानो जग्गा वा कुनै धितो दर्ता छ, तपाईं प्राप्त हुनेछ एक स्थिर आय लागि केही बैंक, एक ऋण छ । आत्म-कार्यरत वा. त्यसपछि तपाईं गर्न सक्षम हुनुपर्छ तीन पूर्ण पात्रो वर्ष को सकारात्मक आय साबित गर्न छ । त्यसपछि तपाईं प्राप्त गर्न सक्छ (को रूप सुरक्षा) मा एक ऋण सहित, ऋण-गर्न-मूल्य को सम्पत्ति छ । एक हालत लागि खरीद को राजधानी छ, को पाठ्यक्रम, छ कि एक कारण ऋण रूपमा सूचीबद्ध छ एक सुरक्षा मा नयाँ ऋण मा देशमा दर्ता. वैकल्पिक रूपमा, तपाईं पनि सक्नुहुन्छ जस्तै नगद, यस्तो रूपमा फिर्ती को एक जीवन वा वार्षिकी खरीद मूल्य गर्न दिनु. भने एक कारण छ ऋण मा दर्ता देशमा दर्ता, यो क्रेडिट तर पहिले नै भुक्तानी भएको छ, बन्द हुन सक्छ खटाइएको एक बन्धकी नयाँ बैंक । आधारभूत दोष को बैंक रूपमा सेवा गर्दैछन् सुरक्षा को लागि आफ्नो ऋण, यसैले, तपाईं प्राप्त अनुकूल दीर्घकालीन चासो दर. एउटा जिम्मेवारी सिर्जना मात्र एक सानो देशमा दर्ता र नोटरी लागत जबकि, एक नयाँ दर्ता छ अधिक महंगा. को ऋण राशि लागि नयाँ दर्ता को एक देशमा आरोप छ । को मामला मा एक क्रेडिट को. छन् यूरो दर्ता लागत सहित, नोटरी लागत । खरीद पैसा को एक बन्धकी संग र चासो राशि मा निर्भर छ धेरै कारक: ऋण एक बन्धकी प्राप्त गर्न सक्छन् तपाईं सजिलै माध्यम अमेरिकी किनभने हामीले प्रदान एक सन्तुलन को नियम र अवस्था (चासो दर) को धेरै बैंक, साथ दिनु जो यस प्रकार को पैसा खरीद. यस गर्न, हामी देख्न सक्छौं माध्यम मूल्यांकन कि प्रासंगिक जर्मन वित्तीय संस्थाहरूको व्यक्तिगत वित्त अनुरोध, र सम्बद्ध चासो दर पनि साथ दिनु हुनेछ तिनीहरूलाई आफ्नो क्रेडिट प्राप्त. राजधानी हुर्काउन मा एक बन्धकी छ, जो बैंक बनाउँछ आफ्नो क्षेत्र, र जो अवस्था छ । हाम्रो अनुरोध फारम, हामी खोज गर्न सक्छन् संग केही विवरण को नियम र शर्तहरू र तुलना । यो चासो राशि धेरै कारकों मा निर्भर छ. तपाईं चाहनुहुन्छ भने गर्न एक ऋण पुनर्वित्त लागि आफ्नो कार, पुनर्निमाण गर्नु, र एक नै समय मा, यो बन्धकी पुनर्वित्त, हामी तपाईंलाई मदत गर्न सक्छन् के यो सुरक्षित. लागि पनि भुक्तानी को शासकका लागि वा भुक्तान को एक को मामला मा एक छोडपत्र, अक्सर पैसा आवश्यक छ । अधिक रूपमा एक उद्यमी को परिचय को लागि, लगानी मौकाहरू छन् हुर्काउन गर्न राजधानी संग एक सुरक्षा भन्दा एक सम्पत्ति मुख्यतया आवासीय प्रयोग गर्नका लागि छ । एक सानो नोट: हामी तुलना सबै बैंक प्रदान भनेर एक राजधानी हुर्काउन छ । के यो मतलब तपाईं को लागि, सधैं त्यहाँ छ केवल एक नयाँ बैंक, जहाँ कुनै कुरा तपाईं बनाउन आफ्नो अनुरोध छ । यो तपाईं बचत को धेरै समय र प्रयास हो । पहिले, गोपनीयता नीति. क्रम मा को अवस्था स्वीकार परिणामस्वरूप बस मा को उमेर, यो विशेष बैंक, निर्माण परियोजना, नवीकरण वा खरीद को एक घर वा घर खरीद. कहिलेकाहीं तपाईं आवश्यक पनि छ, समर्थन को राजधानी, उदाहरणका लागि छोराछोरी वा नातिनातिनी र उधारो गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नै घर छ । एक बचत बैंक छैन, वा बरु संभावना प्रदान धेरै दुर्लभ हो । यो पनि मामला छ आवेदकहरुको को उमेर अन्तर्गत सत्तरी शायद सम्भव छ. हामी संग तपाईं प्रदान गर्न हाम्रो बाटो काम छ. पनि एक को संभावना एक वित्त, बर्लिन, मा बाल्टिक सागर मा, बभेरियाको वन वा सुन्दर कालो वन, खेल्छ कुनै भूमिका छ । राजधानी खरीद र वित्त संग र बिना एक बन्धकी, एक किसिम प्रदान को सम्भाव्यतालाई । पहिले फारम थियो पठाउन, गोपनीयता नीति. स्वीकार गर्न, यो नियम र अवस्था.
भूमि कर: समय छ । एक राष्ट्रव्यापी लागि कल मौलिक कर सुधार
कम गर्न स्थानीय बजेट
पहिलो एकजर्मनी मा रेडियो-साक्षात्कार. राय मा कथित समझौता को वित्त को मन्त्री. व्याख्यात्मक फिल्म: भूमि मूल्य.
कर मा सेकेन्ड पठाउने एक पत्र सबै र मा यो निर्माण गर्न आवश्यक नियमित निवेश.
तपाईं प्राप्त गर्न र विशेष आवश्यकताहरु समय छ । तसर्थ. यो महत्त्वपूर्ण छ मा निर्माण गर्न भवन संग वास्तविक सतहहरूमा र वास्तवमा यो बाटो मा अवस्थित पूर्वाधार यसको पूर्ण क्षमता. संरक्षण. र प्रयोग को परिदृश्य । निवेश सम्पत्ति मालिक हुँदैन नेतृत्व गर्न एक उच्च सम्पत्ति कर । यो ग्यारेन्टी दिन्छ कि केवल एक देशमा कर को रूप मा तल्ला महंगा छ । एक निष्पक्ष र लगानी-मैत्री कर हुन छैन जटिल: सम्पत्ति मा भवन निर्धारण गर्दा मूल्य को खाता. एक पर्याप्त सरलता छ । एक किसिम को वित्तीय अधिकारीहरु सक्छ अर्पण गर्न आफ्नो समय. अधिक महत्त्वपूर्ण कुराहरू लागि टेलिभिजन कार्यक्रम देखि अनुगमन. फेब्रुअरी:"सट्टेबाजों उपयुक्त: नीति अवरुद्ध भूमि मूल्य कर".
वकील, यातायात व्यवस्था, सिइजेन, यातायात दुर्घटना
तिनीहरूले संलग्न थिए एक यातायात दुर्घटना र क्षति भोगे छ । त्यसपछि राखे को बन्दोबस्त मा दावा हाम्रो हातमा छ । तपाईं गर्न सक्छन् विवाद जोगिन बीमा कम्पनी संग, र विशेष मा, यो समस्या भने, यो रकम हर्जाना वा मूल्यांकन लागत छलफल गरिनेछ । व्यवस्था दृढ संभालती आफ्नो कार दुर्घटना चाँडै, र द्वितीय सजिलै । तपाईं को आवश्यकता को हेरविचार गर्न केहि छ । हाम्रो यातायात व्यवस्था वकिल ह्यान्डल सम्पूर्ण पत्राचार संग, को विरोध दायित्व बीमा र सुनिश्चित छ भन्ने दावा संग आवश्यक स्थिरता र हुन पूर्णतया लागूहाम्रो यातायात वकिल छन् सफलतापूर्वक मा धेरै वर्ष को लागि बन्दोबस्त को दावा । देखि एक शुद्ध 'पाना धातु क्षति"गर्न सल्लाह को मामला मा जटिल दुर्घटना घाइते वा मृत्यु को एक दल को, हाम्रो ट्राफिक वकिल छन् आफ्नो पक्षमा र आफ्नो अधिकार को लागि लड्न. यो एक कुनै दोष सडक दुर्घटना, आत्म-तिर्न कुनै वकील गरेको शुल्क । तपाईं सही गर्न सुम्पिन्छु प्रवर्तन को आफ्नो दावा, एक यातायात वकील, सुरुदेखि छ । भने बीमा पहिले नै बनाएको नियम हो । लागत को यातायात वकील दिन्छिन् - अप चरम अपवाद बीमा लागि को दोषी पार्टी दुर्घटनामा अवस्थामा छ । त्यसैले, तिनीहरूले, संग कमीशन को हाम्रो वकिलहरूले लागि यातायात व्यवस्था, कुनै जोखिम छ.
मात्र भने तपाईं यो दुर्घटना संग ऋण मा, त्यहाँ रहेको एक निश्चित राशि को आफ्नै शेयर । पनि, पनि मानिन्छ"सरल"कार दुर्घटना, यो लिन उचित कानूनी सहयोग । किनभने बीमा हो शिविरमा एक दुर्घटना, एक वित्तीय चासो मा एक तपाईं को लागि सबै भन्दा अनुकूल को बन्दोबस्त यातायात दुर्घटना भएको छ । दावा को सिकार छन् नियमित अवस्थामा बहुमत मा, केवल अपूर्ण छ । त्यसैले, बीमा कम्पनीहरु कम गर्न प्रयास वैध दाबी छ । बिना कानूनी मदत, यो अक्सर असम्भव छ प्राप्त गर्न क्षति हुन पूर्णतया प्रतिस्थापन । तपाईं पैसा गुमाउन छैन र राख्नु बन्दोबस्त को दावा को हात मा हाम्रो वकिलहरूले लागि यातायात व्यवस्था सिइजेन.
यातायात दुर्घटना मा सबैभन्दा साधारण मान्छे, यो त-भनिन्छ"ग्रीवा मेरुदण्ड सिन्ड्रोम", क्षति भएको छ । यस कारण महत्वपूर्ण घाँटी र टाउको दुखाइ सम्बन्धित रोग एक को ग्रीवा मेरुदण्ड को एक परिणाम रूपमा एक संघर्ष संग अर्को वाहन. विशेष सुविधा को यो चोट छ कि पीडा उत्पन्न गर्दैन तुरुन्तै दुर्घटना पछि, तर केवल अप बीस-चार घन्टा पछि । हाम्रो वकिलहरूले लागि यातायात व्यवस्था सिइजेन परिचित समस्या को दुर्घटना-सम्बन्धित चोट ध्यान र तपाईं छन् कि सुनिश्चित पर्याप्त क्षतिपूर्ति छ । मा, भोगे जर्मनी मा एक पुरा रूपमा. सामान्य घाइते । को एक महत्वपूर्ण भाग यी घाइते छन् ग्रीवा मेरुदण्ड, जो उठ्न कारण एक पछि-अन्त संघर्ष । बारेमा को व्यक्तिगत चोट हो, गर्न ग्रीवा मेरुदण्ड- चोट, वा चिकित्सकीय. एक यातायात दुर्घटना हुन सक्छ महत्वपूर्ण शरीर क्षति वा व्यक्तिगत चोट । त्यसपछि एक दुखाइ को पैसा दुर्घटना सिकार । को पर्याप्तता हर्जाना लागि दुखाइ र दुःखकष्ट छ हुन कटिबद्ध को गणना मा नियमित क्षतिपूर्ति गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ टेबल, जो विभिन्न न्यायलाई गर्न समावेश छन् पीडा धन । मोटर दायित्व बीमा गर्न प्रयास, दुखाइ को पैसा सकेसम्म कम छ । अक्सर दावा, विशेष मा, क्षेत्र को मेरुदण्ड हुनेछ छैन, स्वीकार गर्न सकिन्छ, एक फलतः रूपमा एक दुर्घटना भएको छ । हाम्रो वकिलहरूले लागि यातायात मदत कानुनी सिइजेन तपाईं आफ्नो सही गर्न, र स्थापना गरेर, एक उचित"पीडा र दुःख"हुनेछ ।.
दान को सम्पत्ति ठेक्का, फिर्ती, नियन्त्रण
अचल सम्पत्ति अक्सर छैन मा पारित गरेर उत्तराधिकार गर्न पति वा छोराछोरीलाई यो बलियो सुरक्षा मा स्वामित्व को स्थानान्तरण को सम्पत्ति को सुरक्षित छ एक सहमत पक्षमा दाता अनुबंध मा, यो प्रयोग गर्न सक्छन्, सम्पत्ति वा आफ्नै मा खाता लागि भाडा । एक सानो कमजोर, को सही निवास, जो प्रदान लागि मात्र आफ्नै प्रयोग. को ठूलो महत्त्व मा दान को सम्पत्ति मा कर पक्ष । को मामला मा एक अनावश्यक स्थानान्तरण गर्न जीवनकालमा उपहार कर । पहिले नै गरेर संविदात्मक प्रबन्धमा, तपाईं गर्न सक्छन् यहाँ यो नरम, कम गर्न, उदाहरणका लागि, धारणा को देनदारियों देखि अचल सम्पत्ति वित्त, वा एक, उपहार कर भंडार तर पनि को सन्दर्भमा उपहार कर फिर्ती, एक अनुकूलन माध्यम प्रयोग को लाभ लागि, उदाहरणका लागि, परिवार, घर वा भाडामा आवासीय सम्पत्ति, वा को मामला मा दर्जा खेल सम्भव छ ।"ज्याक को सबै ट्रेडहरुमा"पूर्वानुमानित उत्तराधिकारी को हालतमा अचल सम्पत्ति परिवार द्वारा पूल छ । को सदस्य को परिवार साझेदारी स्थापना (.) मा ल्याउन र घरहरू, फ्लैट्स र अन्य सम्पत्ति भन्दा अन्य कम्पनी गरेको सम्पत्ति छ । सरुवा हुन त यो छ छैन अचल सम्पत्ति नै तर कम्पनी मा शेयर छ । यसले धेरै फाइदा छ । कानुनी हुन्छन् साथै सम्भाव्यतालाई को उपहार सही गर्न कम्पनी को व्यवस्था छ । यो गर्न सक्छन् हद नियम हुनेछ भनेर सुनिश्चित परिवार धन मा रहेको लामो अवधि, सँगै - उदाहरणका लागि, मार्फत विशेष समापन र पेसाथै, एक क्रमिक शेयर को स्थानान्तरण अनुसार उपहार कर छूट मात्रा सम्भव छ । अक्सर अचल सम्पत्ति सरुवा गरिनेछ समयमा जीवनकालमा उम्कन गर्न पहुँच को शासकका संग एक वैधानिक अधिकारमा छ । तर यो मात्र काम छ भने, समय सुहाउँदो स्थानान्तरण, किनभने सम्पत्ति पछि स्थानान्तरण गर्न सम्पत्ति लागि यति-भनिन्छ अनिवार्य भाग को पूरक दाबी छ । यो कमी संग प्रत्येक वर्ष पछि दान को दस प्रतिशत भनेर, को दस वर्ष पछि कुनै सहभागिता द्वारा ठाँउ लिन्छ नातेदार । तर सावधान हुन । माथि-वर्णन (विषय) को प्राप्तकर्ता सक्षम छैनन् भनेर सुनिश्चित गर्न वर्षको अवधिमा हुन्छ । यहाँ एक डिजाइन प्रदान गरिएको छ, जो भन्ने, कर, र बचाउछ को को मुक्त भाग मा सही.
मा व्यवस्था मर्मतका भत्ता
बस एक छोडपत्र पछि, मा मतभेद मर्मतसम्भार सुरु भएको छ । तर, को मामला मा गैर-विवाहित दम्पतीले, छ अक्सर विवाद रूपमा कर्तव्य को मर्मत, विशेष मर्मतहालको ü तालिका छ, जो इरादा रूपमा एक दिशानिर्देश गर्न मूल्यांकन को मर्मतका लागि एक बच्चा थियो कि अन्तिम. संग भर्खरै समायोजित मात्रा लागि न्यूनतम मर्मतका, एक नयाँ ü तालिका.
भएको छ आवश्यक छ । विगतमा मर्मतका तालिका को लागि, तपाईं पाउन सक्छन् यहाँ.
मा एक वृद्धि मर्मतसम्भार मात्रा छोराछोरीलाई लागि आवश्यक भएको छ किनभने व्यवस्थापिका प्रयोग गरेको आधारभूत निःशुल्क भत्ता र मात्रा लागि बच्चा लाभ उठाउन लागि. खडा । त्यसैगरी, न्यूनतम रोकिराखेको वृद्धि भएको छ लागि यस वर्ष, र छाँटकाँट छ । रूपमा देखि.
उच्च मर्मतका मात्रा मा छोराछोरीलाई लागि आधार को पहिलो नियम संशोधनकारी न्यूनतम (. मा) त्यसैले, को दर लागि न्यूनतम परिणाम अन्तर्गत रोकिराखेको को: धेरै अवस्थामा, एक बिन्दु को छ मुद्दा को मर्मतका, विशेष गरी एक छोडपत्र पछि, र केवल कानूनी भने साझेदारी देखि बच्चाहरु को लागि.
सम्झौता गर्न विस्तार मा विषय संग, यो स्पष्ट हुनुपर्छ सुरुदेखि कि, कुनै पनि दाबी को लागि भत्ता पहिले, यो गर्न आउँछ अनावश्यक. पछि दुवै आमाबाबुले प्रदान गर्न आवश्यक आपूर्ति आफ्ना छोराछोरीको लागि गरेको मर्मतका, त्यहाँ छ एक मौलिक कर्तव्य को मर्मतका । आमाबाबुले जसलाई संग बच्चा जीवन, आफ्नो भेट मर्मतका दायित्व, तर को प्रावधान संग बोर्ड र लज, अर्थात् तथाकथित प्राकृतिक राख्न. फिर्ती मा, अन्य आमाबाबुले तिर्न पर्छ भाग यसको योगदान रूपमा नगद मर्मतका, त्यसैले आर्थिक क्षतिपूर्ति को लागि. तर केवल आमाबाबुले तिर्न पर्छ मर्मतका लागि आफ्नो छोराछोरीलाई किनभने, साथी जीवन साझेदार गर्न प्रतिबद्ध छन्, मर्मतसम्भार, आवश्यकता उठ्छ भने. तर, यो हुन सक्छ कि (पहिले नै वयस्क र शक्तिशाली), छोराछोरीलाई तिर्न पर्छ आफ्नो खाँचोमा परेका आमाबाबुले, त्यसैले भनिन्छ आमाबाबु । सबैभन्दा अक्सर यो मामला मा हुन्छ सन्दर्भ को हेरविचार सेवाहरू सामाजिक सेवा प्रदायकको छ । निम्नलिखित मा, तपाईं पाउन सक्छन्, मूल कुराहरु को व्यवस्था मा मर्मतका र सम्बन्धित मर्मतका दायित्व हो । निर्णायक कारक यहाँ अठोट छ कि एक दाबी मर्मतका लागि छ के मा छ छोराछोरीलाई सधैं मामला छ भने, आमाबाबुले अलग वा छैन सँगै बाँचिरहेका छौं । साथै यो राख्न आवश्यक छ, यो नै समय मा, यो दक्षता को मर्मतका ऋणी छ । किनभने गर्नेहरूलाई मात्र पर्याप्त आय उपलब्ध छ, पनि गर्न सक्षम वास्तवमा खर्च जीवित छ । विशेष गरी मुद्दा को बच्चा छ मर्मतका को कोर्ट मा. यो उद्देश्य लागि, त्यहाँ छन्, एकदम स्पष्ट नियम, को मामला मा विशेष गरी नाबालक, न्यूनतम सुनिश्चित गर्न को मर्मतका आपूर्ति छोराछोरीको - र सिद्धान्त आधारित छ, आमाबाबुको जिम्मेवारी छ । यो छुट्याउन गर्न, छ, सिद्धान्त मा, बच्चा मर्मतका बीच नाबालिगहरूको, पूर्ण-वर्ष विशेषाधिकार छोराछोरीलाई. वर्ष र पूर्ण उमेर कि वाहेक, तिनीहरूले मा एक प्रशिक्षण वा अध्ययन वा बेरोजगार छन्. दिशानिर्देश पाउन सकिन्छ ü तालिका (वर्ष को अन्त मान्य ü तालिका), को मात्रा उच्च क्षेत्रीय कोर्ट संग आफ्नो तालिका लागि एक संदर्भ बिन्दु रूपमा अठोट को प्रयोग को आवश्यकता को लागि समर्थन को लागि छोराछोरी । तपाईं कम्प्युटर मर्मतका संग हाम्रो मर्मतका आत्म गणना. जर्मनी मा,"मा मोडेल, त्यहाँ छ ज्यादातर"जब यो आउँछ मर्मतसम्भार गर्न कि जसको अर्थ एक बच्चा जीवन संग एक आमाबाबुले र बच्चा समर्थन प्रकारको मा को रूप मा बोर्ड र लज आपूर्ति छ. अन्य आमाबाबुले जसलाई संग बच्चा छैन, जीवित प्रदर्शन, यसको मर्मतका दायित्व नगद को रूप मा मर्मतका । अझै पनि एकदम अज्ञात, र धेरै सानो संग साधारण मा विनिमय मोडेल, जहाँ अलग आमाबाबुले शेयर सबै अधिकार र दायित्व, र बच्चा जीवन लगभग बराबर भागहरु मा दुवै आमाबाबुले, र संचालित छ. तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन् थप जानकारी मा एक छुट्टै लेख को समता मोडेल अन्तर्गत"विनिमय मोडेल"को वित्तीय क्षतिपूर्ति पछि बिछोड वा सम्बन्धविच्छेद, को लक्ष्य समर्थन छ । तर, यो कोर्ट लिन तलाकशुदा जीवनसाथीको जिम्मेवारी झन् कर्तव्य, उद्देश्य संग प्रदान लागि आफ्नै मर्मतका । फलस्वरूप, यो अलग छ साथी, कठिन, हकदार मर्मतका लागि लागू गर्न, भने तपाईं प्रदान गर्न सक्षम छन् आफ्नै लागि मुख्य पेशा हो । अन्यथा, यो देखिन्छ अवस्थित लागि बच्चाहरु मा आवश्यक छ किनभने आफ्नो उमेर, को हेरविचार.
यहाँ, तपाईं उम्कन सक्दैन सम्म तीन वर्ष को उमेर, कर्तव्य को मर्मतका, को रूप मा हेरविचार को मर्मतका । क्रम मा कि निर्धारण गर्न, र जो गर्न हदसम्म मर्मत हुन सक्छ दिएको दाबी गर्न सबै छन्, स्पष्ट गर्न निम्न स्थान छ । यो महत्त्वपूर्ण छ भनेर एक सम्बन्ध मा एक सीधा लाइन छ । साथै मर्मतसम्भार गर्न प्रक्रिया को सम्बन्धविच्छेद सबैभन्दा ठूलो बिन्दु मा विषयहरूमा को परिवार व्यवस्था छ । के सबै सुरु त राम्रो र राम्रो ज्ञात छ,"सबैभन्दा सुन्दर दिन,"संसारको अन्त मा अक्सर छन्, विवाद र अघि देखा न्यायाधीश परिवार को कोर्ट । छोडपत्र को दर को विवाह मा, पहिलो सात वर्ष मा उच्चतम, यस्तो सांख्यिकीय सर्वेक्षण.
साथै भावनात्मक दुःख यो लागू को मामला मा एक छोडपत्र मा निर्भर गर्दछ, वैवाहिक सम्पत्ति समयमा विवाह, सम्पत्ति पालन गर्न स्पष्ट छ, जो अक्सर एक बिन्दु को.
पनि लागत को एक छोडपत्र गर्न सकिन्छ माध्यम तान्नुभयो एक गैर-सौहार्दपूर्ण अलग छ । अक्सर, छोराछोरीलाई देखि विवाह छन् भनेर बस को सम्मान मा विवाद गर्न जिम्मा र मर्मतका दाबी बीच मोर्चों को आमाबाबुले छ ।.
अदालत को मध्यस्थता को भियना स्टक एक्सचेन्ज
रूपमा एक सेवा सुविधा, भियना वस्तु विनिमय छ एक अदालत मध्यस्थता, जो प्रेरित आधारमा वैधानिक कानूनी आधार लागि द्रुत, योग्य र लागत-प्रभावकारी बन्दोबस्त, विवाद वा सुरक्षित प्रमाण को द्वारा विशेषज्ञता र सिर्जनानियम को लागि संघीय मन्त्री वित्त र संघीय मन्त्री अर्थशास्त्र लागि र श्रम सम्झौता मा संघीय मंत्री को न्याय को कार्यान्वयन लागि लेख नियम को मध्यस्थता को भियना स्टक एक्सचेन्ज राजपत्र. जुलाई (-फाइलको). चौथो नियम को लागि संघीय मन्त्री वित्त र संघीय लागि मन्त्री र व्यापार स्थान को मध्यस्थता प्रति सम्झौता लागि संघीय मन्त्री, संविधान सुधार, डीरेग्यूलेशन र न्यायपालिका को कार्यान्वयन लागि लेख को परिचयात्मक काम गर्न को नागरिक प्रक्रिया अदालत शुल्क नियम छ । हरेक व्यापार, जुनसुकै कि एक व्यक्ति वा कम्पनी मा कि - वा एक विदेशीले छ अदालत जान सही अगाडि स्टक एक्सचेन्ज मध्यस्थता छ । एक दर्ता व्यापारिक दर्ता आवश्यक छैन । को एक दल को विवाद हो (सामान्य मा यो गनगन पार्टी) हुनुपर्छ एक सदस्य को भियना वस्तु विनिमय. स्टक एक्सचेन्ज सदस्य बन्न मा आवेदन र भुक्तानी को एक-समय सामेल शुल्क निम्न वर्ष मा, एक वार्षिक सदस्यता शुल्क को, । एक फिर्ती सम्भव छ, कुनै पनि समय मा. शेयर विनिमय मध्यस्थता अदालत भन्न सकिन्छ लागि सबै दावा सामान बिक्री ठेके, पनि लागि मात्र भुक्तान को दावा (यो पूरा गर्न छिटो, किनभने अदालत मध्यस्थता को खोज्छ किनभने विशेषज्ञता को रेफरी, रचना गर्न, उदाहरणका लागि, निराधार गुणवत्ता को). अदालतले को अधिकार क्षेत्र को मध्यस्थता पर्छ सहमत हुन लागि विवाद को घटना को दल द्वारा लेखन मा.
यो छ को समावेशीकरणबारे निम्न खण्ड मा बिक्री को अनुबंध बन्द (पत्र):'मध्यस्थता खण्ड: सबै विवाद देखि यो ठेक्का वा देखि भविष्यमा दल बीच, बन्द पसलहरु अन्तर्गत, दुवै अनुबंध भागहरु संग को बहिष्करण को साधारण कोर्ट संग मध्यस्थता नियम र को मध्यस्थता अदालत को भियना वस्तु विनिमय, जो लागू हुनेछ अष्ट्रीया व्यवस्था छ । '.
आपराधिक रक्षा संघ को अष्ट्रीया आपराधिक रक्षक
प्रभावकारी आपराधिक रक्षा स्वभावले को व्यवस्था को नियम छ । त्यो स्वतन्त्र र जिम्मेवार व्यायामएक बोली को लोकतान्त्रिक कानूनी संस्कृति । पदोन्नति र संरक्षण यी आपराधिक रक्षा को उद्देश्य छ संघ.
निःशुल्क कानुनी सल्लाह टेलिफोन
कहिलेकाहीं कानूनी सल्लाह आवश्यक छ । तर सबै कानूनी
केही विवाद गर्न सक्छन् स्पष्ट हुन मात्र अदालत मा स्पष्ट छ । तर पनि यदि यो देखिन्छ हटाउन नसकिने, यो मा छ कुनै पनि मामला मा, धेरै ध्यान चिन्तन कि अदालत जोगिन सक्दैन । किनभने यो, मा नै सक्छ, मा स्पष्ट देखिने अवस्थामा, एकदम अधिक समय, पैसा र नसाहरू, तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ
मा पनि यो मौलिक को पूर्व-जम्मा एक वकील गर्न सक्छन् तपाईं को सन्दर्भ मा एक प्रारंभिक परामर्श.
पहिले तपाईं एक वकील सम्पर्क, हामी सिफारिस हाम्रो पोस्ट छ प्रश्नहरू अघि तपाईं सोध्नुपर्छ तपाईं एक किराया महंगा वकील. रूपमा वैध पूर्णतया योग्य वकील, आकलन गर्न सक्छन् मा सफलता को आफ्नो अवसरहरुमा कुनै पनि विवाद को मामला, पक्कै पनि धेरै भन्दा राम्रो को सबै भन्दा राम्रो-अर्थ तर, एक रूपमा शासन, एकदम नजान्ने मित्र, नातेदार, वा छिमेकी । क्रम मा को लागि वकिल तर मामला छैन लागि पहिलो चरण मा कानूनी लागत, लेख: कसरी वकिल संग आफ्नो समस्या एक मुनाफा बनाउन: तीन तरिकामा रक्षा गर्न बस छ । सुरुमा परामर्श छ एक निर्णायक प्रभाव मा थप पाठ्यक्रम को एक कानूनी विवाद छ । किनभने पहिले नै छ कि निर्णय र अधिक-को-अदालत पछि लाग्न एक आफ्नै गतिविधिलाई उपयुक्त देखिन्छ. अस्तित्व, यो महत्त्वपूर्ण छ भनेर तपाईं आफैलाई सूचित समयमा प्रारंभिक परामर्श बारेमा भेट गर्न सन्दर्भमा, उदाहरणका लागि, को एक आपत्ति गर्न एक दण्ड वा पेश प्रदर्शन । तपाईं सम्झना यस्तो एक समय सीमा, तपाईं गुमाएका प्रक्रिया अघि यो छ पनि थालेका छन् । यो राम्रो छ त्यहाँ छन् भनेर विभिन्न तरिकामा बनाउन कम्तीमा वकील गरेको प्रारंभिक परामर्श लगभग नि: शुल्क छ । सल्लाहकार सहायता ऐन, उदाहरणका लागि, अनुमति दिन्छ छन् जो मा एक कम आय, क्रमशः को सम्पत्ति, एक कानूनी सल्लाह बाहिर अदालत कार्यवाही को एक वकील द्वारा आफ्नो विकल्प को छ । मा भुक्तानी हुनुपर्छ यो मामला छ, एक अधिकतम को एक सानो आर्थिक योगदान को बारेमा दस बीस यूरो. परामर्श मदत छ बाहिर-को-अदालत समकक्षी कानुनी सहायता, जो मात्र हुन सक्छ एक न्यायिक प्रक्रिया अनुरोध गरिएको छ । सल्लाहकार सहयोग हुन सक्छ क्षेत्रमा लगभग सबै व्यवस्था, साथै लागि अनिवार्य मेलमिलापका कार्यवाही हुन नं. यी को, केवल केही विशेष अवस्थामा, जस्तै कर, कानूनी मुद्दाहरू वा अपूर्ण अवस्थामा समावेश छन्. अधिक जानकारी को लागि, को विषय मा निःशुल्क कानुनी सल्लाह लेख त्वरित गाइड छ: कसरी प्राप्त गर्न निःशुल्क कानूनी सल्लाह. पछि मात्र कानूनी सुरुमा परामर्श यो सामान्यतया निःशुल्क छैन । यो शुल्क को एक कानूनी सल्लाह तर पनि यहाँ केही सीमा, यो समय द्वारा वकिल पारिश्रमिक ऐन. अनुसार खण्ड तीस-चार कानूनी सल्लाह सक्छ उपभोक्ताहरु मई अनुरोध को एक अधिकतम यूरो तर, जब यो आउछ कानूनी विवाद बाहिर को व्यापारिक वा स्वतन्त्र गतिविधि हुन सक्छ, शुल्क धेरै उच्च छ । कुनै पनि मामला मा, तर छलफल छ को मामला मा, को ग्रहण को जनादेश मा पालन-अप लागत । लागत को कानूनी सल्लाह यसको पूरा मा द्वारा नजर छ रूपमा छैन सजिलो छ रूपमा, यो पहिलो नजर मा लाग्न सक्छ किनभने, यो वैधानिक आवश्यकताहरु प्रदान गर्न वकील मा कानूनी सल्लाह पर्याप्त त्यसैले वकील पारिश्रमिक ऐन, छ । रूपरेखा सेट अप शुल्क छ, तर अनुमति उहाँलाई, उदाहरणका लागि, र प्रतिलिपि लागत लागि अतिरिक्त कार्ड र साथै नगद, वा अध्ययन को मामला-सम्बन्धित कागजातहरू चाँदी अतिरिक्त.
साथै, अधिवक्ता गुणन गर्न सक्छन् आफ्नो राजस्व को ग्रहण द्वारा वर्ग कामले आराम । त्यहाँ, एक रुचाउँछन् बोल्न कार्य संग्रह वा.
तर तपाईं चाहनुहुन्छ जे यसलाई कल लागि, वकील यो फाइदा छ कि उहाँले आवश्यकता अझ बढाउन गर्न, केवल एक पटक एक विषय क्षेत्र मा, र एक मामला गर्न सक्षम हुन, धेरै ग्राहकहरु संग आफ्नो ज्ञान र आफ्नो काम छ । तापनि वकील आधारित हुनुपर्छ आधारमा सिर्जना तालिका को शुल्क, तर उहाँ बाध्य पालन गर्न छ । र वास्तवमा, सबैभन्दा को वकील गर्न रुचि चार्ज अनुसार एक तला शुल्क वा पनि राम्रो एक घन्टा को आधार मा. राशि गणना सिद्धान्त अनुसार मूल्य मा विवाद, साथै हदसम्म र कठिनाई को सम्पादन विवाद मा प्रश्न छ । चौडाई सीमा सक्छ त्यसैले देखि यूरो सम्म पाँच सय यूरो, वा पनि परे. आफ्नो औसत प्रतिघण्टा दर, हाल छ बारे दुई सय, यो"यूरो, हुनत एक बनाउन पर्छ स्पष्ट भिन्नता: जबकि को औसत प्रतिघण्टा दर को एक वकील लागि निजी व्यक्तिहरूलाई र साना कारोबार संग, बारे एक सय यूरो, यो को मामला मा ठूलो कम्पनीहरु, र मध्यम आकारको कम्पनीहरु वरिपरि, यूरो प्रति घण्टा.
यस्तो अनुबंध गर्न वकिल ले यो विवाद सबै अधिक फिर्ता कम मूल्य किनभने, शुल्क तालिका कवर, विशेष मा, को मामला मा साना अवस्थामा हुन असम्भाव्य छ, खर्च । अधिक महत्त्वपूर्ण छ, यो छ, त्यसैले, मा बाबजुद सबै माथि-उल्लेख कानूनी रूपरेखा पहिले नै समयमा संग पहिलो सम्पर्क वकील बारेमा शुल्क र निर्णय अघि एक वकील लागि धेरै कुनै-दायित्व कोटेशन तुलना.
वस्तुतः यो केवल छ, र यसैले सबै अधिक ö अपवाद यो कानूनी शुल्क पाता मा पहिलो परामर्श । यहाँ, व्यवस्थापिका सेट छ, मुनाफा को खोज को लागि वकिल, र स्पष्ट सीमा छन् । सुरुमा परामर्श खर्च हुन सक्छ को एक अधिकतम यूरो.
तर, यो मात्र लागू गर्न उपभोक्ताहरु । कारोबार लागि, आत्म-रोजगार र बनावटी आत्म-कार्यरत छन् यो यी दुई.
बरु, शुल्क त्यहाँ आधारमा सम्बन्धित राशि मा विवाद छ । प्राप्त गर्न (अपेक्षाकृत) सरल तरिका वित्तीय सहयोगका लागि कानुनी शुल्क संग दाबी कानूनी संरक्षण बीमा. यहाँ यो सिफारिस गरिएको छ, तर कुनै पनि मामला मा, र जुनसुकै को को बीमा नीति मा अग्रिम गर्न सोध्न भने बीमा पनि गर्न इच्छुक सबै वा लागू गर्न कम्तिमा एक भाग को लागत को निर्धारित नियुक्ति । अक्सर सुरुमा परामर्श सूचीबद्ध हुनेछैन शुल्क सर्तहरू र अलग - गर्न सक्छ, जो छ, पक्कै को मामला मा, एक धेरै खराब बीमा विवाद छ । साथै, कानूनी संरक्षण बीमा कवर छैन, यो लागत को सबै सल्लाह छ । रूपमा छ, त्यसैले अक्सर"को सानो मुद्रण गर्नुहोस्", भन्न छ कि यो नियम र अवस्था महत्वपूर्ण छ. र भने को अधिग्रहण लागत परामर्श छैन पुष्टि, एक मांग छ देखि यो एक बीमा कम्पनी कर्तव्य - मा छैन लागत परामर्श विराजमान रहन चाहनुहुन्छ छ । किनभने वैधानिक वकील गरेको शुल्क हो, जो द्वारा देय ग्राहक वकील गर्न पछि वकील पारिश्रमिक ऐन को लागि प्रारंभिक परामर्श र सल्लाह, छ, के, को मात्रा, जो लागि कानूनी संरक्षण बीमा कम्पनी जिम्मेवार छ. मा, बीमा ठेके, यी ग्रहण परामर्श लागत को राशि मा यूरो प्लस भ्याट, जुनसुकै को उच्च लागत र दायित्व जोखिम को लागि वकील र के मूल्य छ मा विवाद छ । को मामला मा रूपमा सामान्य प्रतिघण्टा दर, बीच महत्वपूर्ण मतभेद निर्भर कर्मचारीहरु र अन्य निजी व्यक्तिहरूलाई एक हात मा, साथै फ्रीलांसरों र कम्पनीहरु अर्कोतर्फ, पनि त्यहाँ अवस्थित. उत्तरार्द्ध लागि, यूरो-कैपिंग लागू गर्दैन, त्यसैले, तपाईं समातेर गर्न धेरै गहिरो खल्ती मा छ । यो पनि साँचो हो भने वर्तमान मामला को हो एक व्यापारिक वा स्वतन्त्र गतिविधि मा एक अन्यथा निर्भर कर्मचारीहरु बुझाउँछ, एक निजी व्यक्ति । तर कम से कम, को वकील गर्न छ यी शुल्क कुनै पनि मामला मा - निर्देशन तिनीहरूलाई द्वारा - को कुल चलानी घटाउनु छ । भने वकील छ मा प्रारंभिक परामर्श, व्यापक गतिविधि को फाइदाको लागि ग्राहक, उहाँले फिर्ता हुनुपर्छ पनि देखि कुल बिल भने, तपाईं मा खडा प्रत्यक्ष जडान संग थालनी परामर्श । यो जरूरी छ कि सुरुमा, परामर्श र अतिरिक्त क्रियाकलाप नै व्यक्ति मा आदेश दिइएको थियो, विषय-सन्दर्भमा सल्लाह र गतिविधि कम से कम आंशिक गर्न समान, र बीच, सल्लाह र गतिविधिहरु को एक अस्थायी सम्बन्ध छ । विशेषज्ञ बारेमा जानकारी प्राप्त एक मुक्त सुरुमा परामर्श सम्पर्क, उपभोक्ता संरक्षण संघ. शायद तिनीहरूले हौं तर पनि एक संघ जस्ता भाडादारों संरक्षण संघ, प्रदान यसको सदस्य एक मुक्त सुरुमा कानूनी सल्लाह भाडादारी विवाद छ । तर, यो ज्यादातर मात्र आफ्नो सम्बन्धित क्षेत्र को गतिविधि, उदाहरणका लागि, परिवहन र यात्रा व्यवस्था को मामला मा सवारीसाधान क्लब वा श्रम व्यवस्था संग यूनियन.
पछि को सूत्रपात प्रक्रिया: पोल्याण्ड, हंगेरी यो पछिल्लो, यूरोपीय संघ नाकाबन्दी
புரிந்துக் நன்கொடை மாதிரி - நன்கொடை ஒப்பந்தம் முறை
© 2021 जर्मन वकिल अनलाइन. सबै भन्दा ठूलो कानूनी.